စကားနဲ့မှော်အတတ် (စာ ၂၄ မှ ၃၁)
အောက်ပါကတော့ နယူးဟီပရိုက်ဒိစ်က တေးတပုဒ်ဖြစ်ပြီး ကျောက်ဆောင်ထဲမှာ နေတယ်ဆိုတဲ့ မိန်းမနှစ်ဦးဆီ ရည်ညွှန်းသီဆိုဟန် ရေးဖွဲ့ထားတယ်။
"တေးသီဆိုနေတယ်။ တေးသံ အော်မြည်နေတယ်။
သင်း ငါ့ဇနီးဖြစ်စေလို့ တေးသံက အော်နေတယ်။
ဟိုမှာရှိတဲ့မိန်းမ၊ မြင့်မြတ်တဲ့ကျောက်ဆောင်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့
အထဲမှာ ထိုင်နေတဲ့၊ ကျောက်တုံးထဲမှာနေတဲ့ မိန်းမနှစ်ယောက်တို့
တေးသံက နှစ်ယောက်လုံးကို ထွက်ခဲ့ကြလို့ အော်နေတယ်…။"
(ကိုးကားချက်အညွှန်း ၉။ ။ဂျေ လေးယဒ် "မာလေကူလာက ကျောက်ခေတ်လူသားများ" ၁၉၄၂၊ စာ ၁၄၂)
ဒီကဗျာမှာ တကယ့်ဖြစ်ရပ်နဲ့ စိတ်ကူးယဉ်မှု ရောထွေးနေတာမျိုး မဟုတ်တော့ဘဲ အမိန့်ပေးနေတာကို တွေ့ရမယ်။ ဒါပေမယ့် အမိန့်ပေးပုံက တိုက်ဆိုင်သူများကို တိုက်ရိုက်ပေးနေတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘူး။ တေးသံရဲ့ခိုင်းစေတတ်တဲ့ မှော်အစွမ်းနဲ့ ပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်။ တေးသံကို သဘာဝထက်လွန်တဲ့ တန်ခိုးတော်တခုအဖြစ် သဏ္ဍာန်ပြုထားလေရဲ့။
နောက်ဥပမာတခုက ဂျာမန် သစ်ခုတ်သမား တေးသံတပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
Klinge du, klinge du, Waldung,
Schalle du, schalle du, Halde,
Halle wider, halle wider, Hainlein,
Tone wider, grosser Laubwald,
Wider meine gute Stimme,
Wider meine golden kehle,
Wider meine Leid, des lieblichstel!
Wo die Stimme zu verstehen ist,
Werden bald die Busche brechen,
Schichten sich von selbst die Stamme,
Stapeln sich von selbst die Klafter,
Haufen sich zum Hof die Schober,
Ohne junger Manner Zutun,
Ohne die gescharften Aexte.
(ကိုးကားချက်အညွှန်း ၁၀။ ။ ဗြူခါ၊ စာ ၄၇၃)
သစ်ခုတ်သမားတွေက သစ်ပင်တွေကို သူတို့ရဲ့တေးသံကို နာခံတဲ့အနေနဲ့ မြေကြီးပေါ်လဲကြ၊ သစ်တုံးများအဖြစ် ပြတ်ကြ၊ တောထဲက လိမ့်ထွက်သွားကြ၊ ပြီး သစ်ဝိုင်းထဲမှာ ဖာသာစုပုံနေကြဖို့ စေခိုင်းကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံး ဖြစ်ပျက်ကြလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သူတို့သိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်တော့မှာလို စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ချင်ကြတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းမှာ အထောက်အကူလည်း ရတယ်။ ကဗျာဟာ မှော်အတတ်က ပေါက်ဖွားလာခဲ့ရတာပါပဲ။
နောက် ဥပမာတခုကတော့ ရှေးဟောင်း အိုင်းရစ် နိမိတ်ဟော ကဗျာတပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
စုန်းတစ္ဆေလွင့်ရှားကာ၊ ဥယျာဉ်ပန်းမန် ဝေဆာစွ၊
စပါးပင်တွေ ရွှမ်းမှည့်စွ၊ ပျားပိတုန်းတို့ ပျံဝဲကာ၊
ကမ္ဘာကြီး ရွှင်လန်းစွ၊ ငြိမ်းချမ်းစွ၊ ဝပြောစွ၊ တပေါင်းနွေသာစွ။"
(ကိုးကားချက်အညွှန်း ၁၁။ ။ Revue celtique တွဲ ၂၆၊ စာ ၃၂)
ဒီကဗျာကို သာယာတဲ့ ရတုရာသီ လာပါစေကြောင်း သိုက်တပေါင်တရပ်အနေနဲ့ ပရောဟိတ်ဆရာတဦးက ရွတ်ဆိုရတယ်။ အလိုရှိတဲ့ဖြစ်ရပ်ကို တကယ်ဖြစ်နေတော့သလို သရုပ်ဖော်ထားတာပါပဲ။
ဒီလိုနဲ့ မသိမသာလို့ဆိုရမလောက် အဆင့်အလေးတွေနဲ့ ကျနော်တိုပအားလုံး သိကျွမ်းနေကြတဲ့ ကဗျာအမျိုးအစားဆီကိုတိုင် ရောက်လာခဲ့တယ်။
တောသစ်ရွက် ပေါ်ထွန်းကာ၊ ဥသြတွန်ကြော်ငြာ။"
ဒီကဗျာမှာ တင်ပြထားတာတွေကတော့ ဖြစ်ရပ်အမှန်ကို တင်ပြထားတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီမှာကိုပဲ အိန့်ပေးသံလေး ပါနေသေးတယ်။ ဥရောပ တောသူတောင်သားတွေရဲ့ဘဝမှာ အမြစ်တွယ်ပြီး ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရတဲ့ ဒီရာသီဖွဲ့တေးသံလေးတွေဟာ တောသူတောင်သားတွေရဲ့ဆနတဒတွေ အကောင်အထည်ပေါ်လာစေရေး ရည်စူးပြီး စပ်ဆိုခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဖွဲ့နွဲ့မှုကလေးတွေမှာကိုပဲ မန္တရားသံကလေးတွေ ပဲ့တင်ထပ်ပြီးနေတယ်။ ကဗျာဟာ မှော်အတတ်က ပေါက်ဖွားလာခဲ့ရတာပါပဲ။
"တောက်ပတဲ့ ကြယ်ကလေး၊ ငါ မင်းလို တည်တံ့ခိုင်မြဲလိုလှတယ်"
ကဗျာဆရာတွေဟာ ဘာကြောင့် မဖြစ်နိုင်တာတွေကို တောင့်တကြရတာလဲ။ အဖြေကတော့ ဒါဟာ မှော်အတတ်က ဆင်းသက်လာခဲ့ရတဲ့ ကဗျာရဲ့အဓိကအင်္ဂါရပ်ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ သဏ္ဍာန်တုအကရဲ့အရူးအမူး တက်ကြွမှုအရှိန်အတွင်းမှာ ငတ်မွတ်ကြောက်လန့်နေတဲ့ အရိုင်းအစိုင်းတွေဟာ သဘာဝနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရာမှာ မိမိတို့ရဲ့အားနွဲ့မှုကို စိတ်အားပြင်းပြင်းပြပြ အရူးအမူးလှုပ်ရှားခြင်းဖြင့် ဖော်ပြကြတယ်။ တကယ်ရှိနေတဲ့ကမ္ဘာ၊ ဗဟိဒ္ဓကမ္ဘာကြီးကို မေ့ပျောက်ပြီး မသိတဲ့ကမ္ဘာ၊ စိတ်ကူးယဉ်မှုဆိုတဲ့ အဇ္ဈတ္တကမ္ဘာ၊ ကိုယ်ဖြစ်စေလိုတဲ့ကမ္ဘာထဲကို နစ်မြုပ်ပစ်လိုက်ကြတယ်။ ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒအားထုတ်မှုနဲ့ တကယ့်ဖြစ်ရပ်ပေါ်မှာ ဟန်ဆောင်သရုပ်ကို ဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ကြတယ်။ အဲဒီလို ရည်စူးရာမှာ မအောင်မြင်ကြဘူး။ ဒါပေမယ့် ကြိုးစားမှုကတော့ အချည်းအနှံမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီလိုကြိုးစားမှုကြောင့် သူတို့နဲ့သူတို့ဝန်းကျင်အကြား စိတ်ပိုင်းပဋိပက္ခဟာ ပြေပျောက်သွားတယ်။ ပိုနေမြဲ ကျားနေမြဲ ပြန်လှည်ရရှိသွားတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တကယ့်ဘဝဆီ ပြန်လှည့်ခဲ့ရတဲ့အခါ ဒီဘဝနဲပဖက်ပြိုင်ရုန်းကန်ဖို့ အရင်ကထက် တကယ်ပဲ ပိုမိုအစွမ်းရှိလာကြတော့တယ်။
အဲဒီတုန်းက ဝန်းကျင်အခြေအနေကို ဆင်ခြင်ကြည့်ပါ။ ကိတ်စ်ဟာ အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ်မှာဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးပြန်လည်ကောင်းလာဖို့ နောက်ဆုံးကြိုးပမ်းတဲ့အနေနဲ့ အီတလီကို အသွားမှာပေါ့။ သူဟာ ဖင်နီဘရောင်းကို နောက်ဆုံးအကြိမ် တွေ့ခဲ့ရတယ်။ အင်္ဂလိပ် ရေလက်ကြားထဲမှာ သူစီးလာတဲ့သင်္ဘောဟာ မိုးလေကြောင့် လားလ်ဝါသ်ကိုဗ်ဆီ လွင့်ပါသွားပြီး သူ ကမ်းပေါ်တက်ခဲ့ရတယ်။ အင်္ဂလန်မြေပေါ်ကို သူ နောက်ဆုံးခြေချသွားခြင်းပါပဲ။ ညနေမှာ သင်္ဘောဆီကို ပြန်ခဲ့ရင်း ဒီကဗျာတိုလေးကို စပ်လိုက်ပြီး ရှိတ်စပီးယား ကဗျာပေါင်းချုပ်စာအုပ်ထဲမှာ ရေးသွားရှာခြင်းဖြစ်တယ်။ လေးလကြာတော့ သူ့ခမျာ အီတလီမှာ အားအင်ကုန်ခန်း နွမ်းလျတဲ့ရောဂါနဲ့ သေဆုံးခဲ့ရတယ်။
"တောက်ပတဲ့ ကြယ်ကလေး၊ ငါ မင်းလို
ဒါဟာဖြင့် အသိနဲ့ယှဉ်တဲ့ ဆန္ဒပြုမှုကလေး၊ သေတော့မယ့်ဆဲဆဲ လူသားတယောက်ရဲ့ တောင့်တသံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီမှာ သတိရမိတဲ့ကဗျာလေးတွေ ရောယှက်နေပါတယ်။
"သို့သော်လည်း ငါသည် တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုအရာတွင်
ကောင်းကင်တခွင်လုံး၌ ပြိုင်ဖက်ကင်းသော ဓူဝံကြယ်ပမာ
ဒီမှာ သူ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးယဉ်မှုဟာ တောင်ကျစမ်းတခုကို လွှတ်ပေးလိုက်သလို လှုပ်ရှားပြီးလာတယ်။ သူ့စိတ်ကူးယဉ်မှုဟာ တဟုန်ထိုးမြင့်တက်လာတယ်။ သူ့ကိုယ်သူ ကြယ်ရယ်လို့၊ အဲဒီနောက် ဖိုးလမင်းရယ်လို့ မြင်လာတယ်။ လူသားရာဇဝင် အစဦးကစပြီး လမင်းဟာ အမြဲထာဝရတည်တံ့မှုရဲ့သင်္ကေတအဖြစ် ရိုကျိုးကိုးကွယ်ရာဖြစ်ခဲ့တယ်။ လမင်းကနေတခါ ကိုဗ့်ဖက်ဆီ ပြေးလွှားစီးဆင်းနေတဲ့ ဒီရေထဲမှာ ညင်သာသာ လူးလွန့်နေတဲ့ သင်္ဘောရဲ့အဖြစ်ကို စိတ်အာရုံမှာ ဝိုးတဝါးထင်မြင်ရင်း သူဟာ ဒီကမ္ဘာမြေ အနိမ့်အမြင့်တွေကြား ဟိုကဒီ စီးဝင်နေတဲ့ ဒီရေတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကို ငုံ့ကြည့်လိုက်မိတယ်။
"ညဉ့်အမှောင်ထုထက်ဝယ် တကိုယ်တော်အဆင်းအဝါဖြင့် နေရသည်မျိုးကား မလိုချင်။
သဘာဝတရား၏ ဇွဲကောင်းသော၊ အအိပ်မဲ့သော
တကယ်နူးညံ့သော အသစ်ကျလသော ဆီးနှင်း
မျက်နှာဖုံးကို ငေးမောကာသာ ကြည့်နေရသည်မျိုးကား မလိုချင်။"
အဲဒီနောက် အနန္တကမ္ဘာထဲကို ပြေးရောက်သွားရာက သင်္ဘောရဲ့အိပ်မွေ့ချသလို ယိမ်းခါမှုများကို ထင်ဟပ်ရင်း ထာဝရတည်မြဲတဲ့ဘဝနဲ့ သူဟာ မြေကြီးဆီကို ပြန်လာခဲ့တယ်။
"တည်တံ့ကား တည်တံ့လျက်ပင်၊ မပြောင်းမလဲလျက်ပင်၊
ငါ၏ လှပသောချစ်သူ၏ မှည့်ရွှမ်းသော ရင်အုံဝယ် အုံးမှီလျက်၊
နူးညံ့ညင်သာ ကြွချည်ကျချည် ဖြစ်နေသည်ကို ထာဝရတွေ့သိခံစားရင်း၊
ချိုမြသော ဂဏှာမငြိမ်မှုဖြင့် ထာဝရနိုးကြားလျက်၊
သူမ၏ ညင်သာသော အသက်ရှူသံကို နားထောင်လျက်လျှင်
ဒါပေမယ့် ဒါဟာ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ သေခြင်းကင်းပြီး အချစ်မရှိနိုင်ဘူး။
"သို့ဖြင့်သာ ထာဝရ တည်မြဲလိုဘိ။ သို့မဟုတ်လျှင်
သူ နိုးလာတယ်။ အိပ်မက်မက်နေတာကို သင်္ဘောရဲ့လှုပ်ရှားမှုက လှုပ်ခါပစ်လိုက်တာနဲ့ တူလှတယ်။ ဒါပေမယ့် အိပ်မက်ကြောင့် သူဟာ သူ့စိတ်ကို နှိပ်စက်နေတာတွေကို လှုပ်ခါပစ်ခဲ့နိုင်တယ်။ စိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကို ပြန်လည်ရရှိခဲ့တယ်။ ကမ္ဘာကြီးဟာ ရုပ်ပိုင်းအားဖြင့်တော့ သည်တိုင်းသည်တိုင်းပါပဲ။
တစ္ဆေနှယ် ပိန်ပါးလာသော ထို့နောက်
ကမ္ဘာကြီးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာကြီးအပေါ် သူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းသဘောထားကတော့ ပြောင်းလဲလာခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူ့အဖို့ စောစောက ကမ္ဘာမျိုး မဟုတ်တော့ဘူး။ ဒါဟာ ကဗျာရဲ့ အနုပဋိလောမတရားပါပဲ။ မှော်အတတ်ရဲ့ အနုပဋိလောမတရားအတိုင်းပါပဲ။
Posted by နေမင်းနီ at Friday, March 26, 20103comments Links to this post
ဗျူရိုကရက် အရင်းရှင် တော်လှန်ရေး
မတ်လမှာ အတောင်အလက် စုံခဲ့တယ်…
၂၇ - ၂၈ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်စစ်တွေနဲ့
ဘုန်းမော်တို့ရဲ့ အာဏာရှင် အာခံရေး
Posted by နေမင်းနီ at Wednesday, March 24, 2010 1 comments Links to this post
စကားနဲ့မှော်အတတ် (စာ ၁၈ မှ ၂၃)
ဒီအချက်သာ မှန်ခဲ့ရင် ကဗျာစကားဟာ အခြေခံအားဖြင့် သာမန်စကားထက် ပိုမိုရှေးကျတယ်လို့ ဆိုလိုရာရောက်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီလို စကားမျိုးမှာ တွေ့ရမြဲဖြစ်တဲ့ နိမ့်မြင့်သံစဉ် ညီညာမှု၊ ဂီတသံပါမှု၊ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်မှုတို့ကို ပိုမိုအဆင့်မြင်မြင့် ထိန်းထားလို့ပါပဲ။ ဒီတင်ပြချက်ဟာ ကြံဆချက်တခုသာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာဦး ဘာသာစကားတွေကို လေ့လာသိရှိရတာတွေက ထောက်ခံပြီးနေကြပါတယ်။ ဒီဘာသာစကားတွေမှာ ကဗျာနဲ့သာမန်စကား ကွဲပြားခြားနားချက်ဟာ အနှိုင်းအဆအားဖြင့် မပြည့်စုံဘဲရှိနေသေးတယ်။
အရိုင်းအစိုင်းတွေ စကားပြောကြတဲ့အခါ သိသိသာသာကို နိမ့်မြင့်သံစဉ်ညီညာမှုနဲ့ လက်ဟန်ခြေဟန်တွေ ဂီတနွှယ်တဲ့လေတွေ ပါနေတယ်။ အချို့ဘာသာစကားတွေမှာ အသံအနိမ့်အမြင့်ဟာ အင်မတန်မှ ဂီတသဘော ပါလွန်း၊ အဓိပ္ပါယ်အတွက် အရေးကြီးလွန်းတဲ့အတွက် သီချင်းတပုဒ် ရေးစပ်သီဆိုရင် တေးသွားကို ပြောနေကျ စကားလုံးတွေရဲ့ပင်ကိုယ်ဂီတသံက အဓိကအားဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းထားတယ်။ စကားပြောနေသူဟာလည်း ဟို အိုင်းရစ်တောသူမကြီးလို ကဗျာဆန်ဆန် စိတ်ကူးယဉ်သွားတတ်မှုမျိုးဆီ မကြာမကြာ ရောက်သွားတတ်တယ်။ ဒီသဘောလက္ခဏာတွေအနက် ပထမနှစ်ခုကို ဒီနေရာမှာ ဥပမာ ထုတ်ပြလို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ နောက်ဆုံးတခုကိုတော့ ပြနိုင်တယ်။
တခါတော့ ဆွစ်သာသနာပြု ဘုန်းကြီးတပါးဟာ အမ်ဘိုဆီ မီးရထားလမ်းနဲ့ကပ်ပြီး ဇူလူးလဲင်းမှာ စခန်းချနေတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေအဖို့တော့ အမ်ဘိုဆီ မီးရထားလမ်းဆိုတာ ဒါဘင်၊ လေဒီစမစ်၊ ဂျွန်ဟန်နက်စဘတ်တို့ဆီကို သွားတဲ့ခရီးလမ်း၊ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဒေသန္တရအခွန်တော် စည်းကြပ်မှုကြောင့် လူငယ်ကလေးတွေ ကိုယ့်အိုး ကိုယ့်အိမ်ကို စွန့်ပစ်ပြီး ကျောက်မီးသွေးတွင်းတွေမှာ မိမိတို့ရဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့ဘဝကို ဆုံးပါးစေရတဲ့ ခရီးလမ်း၊ မိန်းကလေးတွေအဖို့မှာလည်း နောက်ဖေးလမ်းကြား ပြည့်တန်ဆာအိမ်တွေမှာ ပိုလို့ပဲ ဆိုးသေးတဲ့ကံကြမ္မာကို ကြုံဆုံစေရတဲ့ ခရီးလမ်းရယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ဆောင်နေတယ်။ အစေခံတယောက်ဟာ စခန်းမှာ အိုးတွေ ဆေးကြောရင်းက အောက်ပါစကားလုံးတွေကို ရေရွတ်နေတာကို ကြားရသတဲ့။
ခပ်ဝေးဝေးက ဟိန်းဟောက်နေတဲ့ ဟိုလူ
လူငယ်လေးတွေကို ဖျက်ဆီးချေမှုန်းနေတဲ့ ဟိုလူ
ငါတို့ဇနီးသည်တွေကို အကျင့်ပျက်စေတဲ့ ဟိုလူ…။
သူတို့ ငါတို့ကို စွန့်ပစ်ပြေးကြ
မြို့ကိုသွားပြီး ဘဝဆိုးတွေ ခံယူကြတယ်…
ငါတို့တော့ ကိုယ်ချည့် ကျန်လေပေါ့…။
(ကိုးကားချက်အညွှန်း ၄။ ။ အိပ်ခ်ျ အေ ဂျူးနော့ "တောင်အာဖရိက လူမျိုးစုတခုရဲ့ဘဝ" ဒုအကြိမ်၊ ၁၉၂၇၊ တွဲ ၂၊ စာ ၁၉၆-၉၇)
ဒါဟာဖြင့် အနုပညာမပါတဲ့ တကိုယ်တော် ညည်းချင်းကလေးတပုဒ်ပါပဲ။ အစေခံအိုကြီးတယောက် သူ့ဖာသူ ညည်းနေခြင်းမျှဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကဗျာပါပဲ။ မီးရထားက သူ့အာရုံကို ဆွဲယူလိုက်တယ်။ အိုးတွေကို သူမေ့သွားတယ်။ မီးရထားမဟုတ်တော့ဘဲ သူချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့ဟာတွေကို ဖျက်ဆီးပစ်နေတဲ့ အင်အားအတွက် သင်္ကေတတခုဖြစ်သွားတယ်။ သူ့ရဲ့မသိစိတ်ထဲမှာ အသံမြုံပြီးနေခဲ့တဲ့ ဒေါမနဿဟာ အသံမြည်လာတယ်။ အဲဒီနောက် မီးရထားရဲ့ တဂျုံးဂျုံးအသံ ပျောက်ကွယ်သွားပြီး သူလည်း သူ့အိုးတွေဆီကို ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပြန်ပါရော။
ဒီလိုနဲ့ ဒီအရိုင်းအစိုင်းတွေရဲ့သာမန်စကားဟာ ကျနော်တို့က ကဗျာနဲ့သာ ဆက်စပ်ပြီး နားလည်ထားတဲ့အဆင့်တဆင့်အထိ နိမ့်မြင့်သံ ညီညာနေတယ်။ ဂီတသံ နွှယ်နေတယ်။ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်နေတယ်။ သူတို့ရဲ့သာမန်စကားဟာ ကဗျာဆန်တယ်ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ကဗျာဟာ မှော်ဆန်လို့နေတယ်။ သူတို့သိတဲ့ တခုတည်းသော ကဗျာဟာ တေးသီချင်းဖြစ်တယ်။ သူတို့တေးဆိုရင်လည်း အမြဲတမ်းလိုလို ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတမျိုး အတူပါမြဲဖြစ်တယ်။ ဒါရဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဟာ မှော်သဘောဖြစ်တယ်။ အတုယူပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ပြင်ပကမ္ဘာမှာ ပြောင်းလဲမှုတခုဖြစ်စေဖို့ တကယ့်ဘဝပေါ်မှာ လှည့်စားမှုပြုလုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ရင်းပါပဲ။
မောင်ရီလူမျိုးတွေမှာ အာလူသီးအကရယ်လို့ ရှိတယ်။ အာလူးသီးနုနုဟာ အရှေ့လေတွေရဲ့တိုက်ဖျက်ခြင်းခံရလေ့ရှိတော့ မိန်းကလေးတွေဟာ လယ်ကွင်းထဲဆင်းကြပြီး မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်တွေနဲ့ လေတွေမိုးတွေ ချဉ်းနင်းလာဟန်၊ အာလူးသီး ကြီးထွားဝေဆာလာဟန် ကကြတယ်။ ကရင်း အာလူးသီးကို သူတို့ရဲ့နမူနာအတိုင်း လိုက်ဖို့ တိုက်တွန်းပြီး တေးဆိုကြတယ်။ (ကိုးကားချက်အညွှန်း ၅။ ။ ဗြူခါ Bucher စာ ၄၀၉-၁၀) သူတို့ဟာ အလိုရှိတဲ့ဖြစ်ရပ် အကောက်အထည်ပေါ်လာမှုကို စိတ်ကူးယဉ်နဲ့ ဇာတ်ခင်းကျင်းကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ မှော်ပါပဲ။ တကယ့်နည်းလမ်းအစား ကျင့်သုံးတဲ့ လှည့်စားမှုနည်းလမ်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် လှည့်စားမှုမျှသာဖြစ်ပေမယ့် အချည်းအနှီးတော့ မဟုတ်ဘူး။ ကလိုက်တဲ့အတွက် အာလူးသီးတွေအပေါ်မှာ တစုံတရာ တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုတော့ မရှိနိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် မိန်းကလေးတွေအပေါ်မှာတော့ သဘောကျလောက်စရာ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိနိုင်တယ်။ ရှိလည်းရှိတယ်။ အာလူးသီးကို ကယ်တင်ပေလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်နဲ့ အကမှာ စိတ်တက်ကြွပြီဖြစ်လေတော့ ပိုမိုကြီးမားတဲ့ယုံကြည်ချက်၊ ဒါနဲ့အညီ အရင်ကထက် ပိုမိုကြီးမားတဲ့ခွန်အားနဲ့ အသီးငယ်လေးတွေကို ထိန်းသိမ်းပြုစုကြတော့တာပေါ့။ ဒါနဲ့ နောက်ဆုံးမှာတော့ အာလူးသီးအပေါ်မှာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတော့တာပေါ့။ သူတို့ရဲ့စိတ်စောမှုသဘောထားကို တကယ်လက်တွေ့အဖြစ် ပြောင်းလဲလာစေတာနဲ့အမျှ သွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းအားဖြင့် တကယ့်ဖြစ်ရပ်ကို ပြောင်းလဲစေခဲ့ကြပါတယ်။
မောင်ရီလူမျိုးတွေဟာ ပိုလီနီရှင်အနွယ်တွေဖြစ်တယ်။ နယူးဟိဗရိုက်ဒိစ် ကျွန်းသားတွေမှာလည်း အဲဒီလိုပါပဲ။ ဒီကျွန်းသားတွေမှာ နိမ့်မြင့်သံ အမျိုးမျိုးနဲ့ တလှည့်စီဆိုရတဲ့ အပိုဒ်နှစ်ပိုဒ်ပါဝင်တဲ့ ရှေးရိုးစဉ်လာ တေးချင်းပုံစံတခုရှိတယ်။ ပထမပိုဒ်ကို 'အရွက်'လို့ခေါ်ပြီး ဒုတိယအပိုဒ်ကို 'အသီး'လို့ခေါ်တယ်။ (ကိုးကားချက်အညွှန်း ၆။ ။ ဂျေ လေးယဒ် "မာလေကူလာက ကျောက်ခေတ်လူသားများ" ၁၉၄၂၊ စာ ၃၁၅) အခြား ပိုလီနီရှင်ကျွန်းတကျွန်းဖြစ်တဲ့ တိကိုပိရမှာလည်း အပိုဒ်သုံးပိုဒ်ပါ တေးချင်းပုံစံတခုရှိတယ်။ ပထမအပိုဒ်အတွက် အမည်က 'ပင်စည်အရင်း'လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။ ဒုတိယအပိုဒ်က 'ကြားစကား'၊ တတိယအပိုဒ်က 'သစ်သီးခိုင်'လို့ ခေါ်တယ်။ (ကိုးကားချက်အညွှန်း ၇။ ။အာရ် ဖာ့သ် "ကျုပ်တို့ တိကိုပိယလူမျိုး" ၁၉၃၆၊ စာ ၂၈၅) ဒီအခေါ်အဝေါ်တွေကို ထောက်ရင် ဒီတေးချင်းပုံစံတွေဟာ မောင်ရီလုံမငယ်တွေရဲ့အကလိုပဲ သဏ္ဍာန်အတုအကတွေက ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ကြတယ်လို့ သိနိုင်တယ်။ ကဗျာဟာ မှော်အတတ်က ပေါက်ဖွားလာခဲ့ရတာပါပဲ။
ဆက်လက်ပြီး ဆွေးနွေးကြဦးစို့။ အောက်ပါဟာ တရော်ဘရီယန် ကျွန်းများမှာ မာလီနော့စကီး စုဆောင်းခဲ့တဲ့ မန္တာန်တွေထဲက တခုဖြစ်တယ်။
ပေါင်ရိုးက ကျိုးအက်တဲ့အနာ ပျောက်ပြီ
အရေပြားပေါ် ပြီတည်နေတဲ့အနာ ပျောက်ပြီ
ဗိုက်ထဲက မဲမဲအနာကြီး ပျောက်ပြီ
ပျောက်ပြီ ပျောက်ပြီ…။ (ကိုးကားချက်အညွှန်း ၈။ ။မာလီနော့စကီး "သန္တာဥယျာဉ်များ" တွဲ ၂၊ စာ ၂၃၆-၃၇၊ ရှု ၃၁၂)
ဒီကဗျာရဲ့အကြောင်းအရာကတော့ ကဗျာဆန်တယ်လို့ခေါ်ရမယ့် အကြောင်းအရာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ပုံသဏ္ဍာန်က ဟုတ်နေတယ်။ မာလီနော့စကီး မှတ်ချက်ချသလို ဒီမန္တာန်တွေဟာ "အသံထွက်ပိုင်း၊ စည်းဝါးပိုင်း၊ အလင်္ကာပိုင်း၊ ဂုဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာများ ကြွယ်ဝမှု၊ အဆန်းတကျယ် ကာရံနဘေများနဲ့ ထပ်ဆိုမှုများဖြင့်" ထူးခြားနေတယ်။ မိမိတကယ်ဖြစ်စေလိုတဲ့ တကယ့်ဖြစ်ရပ်ကို နှုတ်က ရွတ်ဆိုခြင်းဖြင့် တကယ်ဖြစ်လာအောင် ပြုတယ်။ ရွတ်ဆိုရာမှာလည်း သဏ္ဍာန်တုအကမှ တည်ငြိမ်တဲ့ဂီတသံလာပြီး ပဲ့တင်ထပ်တဲ့ဘာသာစကား အသုံးအနှုန်းနဲ့ ဖွဲ့ဆိုထားတယ်။ သဏ္ဍာန်တုအကဆိုတာ ဖြစ်လိုတဲ့ဖြစ်ရပ် ဖြစ်မြောက်လာတာကို စိတ်ကူးမှာ ဇာတ်ခင်းကြည့်ခြင်းပါပဲ။
Posted by နေမင်းနီ at Wednesday, March 24, 20100comments Links to this post
စကားနဲ့မှော်အတတ် (စာ ၁၂ မှ ၁၈)
ကမ္ဘာဦးခေတ် ကဗျာကို စာနဲ့ရေးသားထားတဲ့ ရှေးခေတ်စာပေတွေထဲမှာ လေ့လာလို့ရမယ်မဟုတ်ဘူး။ သူ့သဘာဝကိုယ်၌က စာနဲ့ရေးထားတာမဟုတ်ဘူး။ စာပေမတိုင်မီခေတ်က ဖြစ်ပေတယ်။ ချွင်းချက်ထားရမယ့် အချို့နေရာတွေမှာသာ စာနဲ့ချပြီးရေးထားခြင်းဖြစ်တယ်။ ကနေ့ခေတ်ရှိ လူရိုင်းတွေရဲ့နှုတ်ဖျားပေါ်မှာ တွေ့ရှိနေတဲ့အတိုင်းပဲ လေ့လာရမှာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအကြောင်း ဘာတခုမှမသိဘဲနဲ့လည်း ဒီလူတွေရဲ့ကဗျာကို နားလည်နိုင်မယ်မဟုတ်ဘူး။ နောက်ပြီး ကဗျာဆိုတာ ထူးခြားတဲ့စကားတမျိုးဖြစ်ပေတယ်။ ကဗျာရဲ့ ရင်းမြစ်မူလကို လေ့လာမယ်ဆိုရင် စကားရဲ့ရင်းမြစ်မူလကို လေ့လာရလိမ့်မယ်၊ ဒါဟာလည်း လူသားကိုယ်တိုင်ရဲ့ ရင်းမြစ်မူလကိုပဲ လေ့လာရလိမ့်မယ်လို့ ဆိုလိုတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ စကားဆိုတာ လူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဝိသေသ လက္ခဏာတွေထဲက တခုဖြစ်နေတာကိုး။ အစဆီကိုပဲ ပြန်ပြီးကောက်ကြရပေလိမ့်မယ်။
လူ ဘယ်လိုပေါ်လာတယ်ဆိုတာကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ နားလည်ဖို့ ကျနော်တို့ အလှမ်းဝေးလျက်ပဲ ရှိကြသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် သိပ္ပံပညာရှင်တွေ သဘောတူညီထားတဲ့ အခြေခံအချက်တချက်ဖြင့် ရှိရဲ့။ လူဟာ အဓိကသဘောလက္ခဏာကြီး နှစ်ရပ်အားဖြင့် တိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ကွဲပြားခြားနားနေတယ်။ လက်နက်ကိရိယာနဲ့ ဘာသာစကားပါပဲ။ (ကိုးကားချက်အညွှန်း ၁။ ။ ဂျီ အဲလိယော့ စမစ် "လူအဆင့်ဆင့် ဖြစ်ပေါ်လာပုံ" ၁၉၂၄။ ဖရက်စရစ် အိန်ဂဲလ် "သဘာဝရဲ့အနုပဋိလောမ" ၁၉၄၀။ ကေ ဗြူခါ "Arbeit and Rhythmus" ၁၈၉၆။ အာရ် အေ အက်စ်ပေးဂျက် "လူ့စကား" ၁၉၃၀)
ပရိုင်းမိတ် (မျောက် စတဲ့ မူလသတ္တဝါ)တွေက အနိမ့်စား ကျောရိုးပါတဲ့ သတ္တဝါတွေနဲ့ ခြားနားနေတဲ့အချက်ကတော့ မတ်မတ်ရပ်နိုင်ခြင်းနဲ့ ရှေ့ခြေတွေကို လက်အဖြစ် အသုံးပြုတတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ ဒီဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုဟာ ဦးနှောက်ထဲက ဆုံလည်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများရဲ့ တဆင့်ဆင့် တိုးတက်ကောင်းမွန်လာမှု ပါဝင်ပြီး သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်က ထူးခြားတဲ့အခြေအနေများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်။ သူတို့တတွေဟာ တောတွင်းတိရိစ္ဆာန်များဖြစ်လေတော့ သစ်ပင်ပေါ်နေရတယ်ဆိုရင် ဖျပ်လပ်ဖို့၊ အမြင်နဲ့အထိအတွေ့ ကျကျနနပူးတွဲလုပ်ဆောင်ဖို့၊ မျက်စေ့နှစ်လုံးနဲ့ တပြိုင်နက် ကြည့်မြင်တတ်ဖို့၊ ကြွက်သားနဲ့ အသေးစိတ်ချုပ်ကိုင်တတ်ဖို့ လိုလာတယ်။ လက်တွေ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက် ဦးနှောက်ကို ပြဿနာအသစ်တွေ၊ အလားအလာအသစ်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်စေရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ စကတည်းကပဲ လက်နဲ့ဦးနှောက် အဓိကဆက်သွယ်မှု ရှိခဲ့တယ်။
လူဟာ ပရိုင်းမိတ်တွေမှာ ဒုတိယအမြင့်မားဆုံးဖြစ်တဲ့ လူမျောက်တွေနဲ့ခြားနားတဲ့အချက်ကတော့ လမ်းလျှောက်တတ်ခြင်းနဲ့ မတ်တတ်ရပ်နိုင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ လမ်းလျှောက်တတ်တာဟာ သစ်တောထဲက ထွက်လာတော့ မြေကြီးပေါ်ကို ဆင်းခဲ့ရလို့ လို့ အချို့က ယူဆတယ်။ ဘယ်လိုကြောင့်ပဲဖြစ်စေ အဓိကအချက်ကတော့ လူမှာ လက်နဲ့ခြေ လုပ်ငန်းပိုင်းခြားမှု ပြီးပြတ်လို့သွားခြင်းပါပဲ။ လူ့ရဲ့ ခြေချောင်းလေးတွေဟာ ကိုင်ဖမ်းနိုင်စွမ်း ကင်းမဲ့လို့သွားတယ်။ လူ့ရဲ့လက်ချောင်းလေးတွေဟာ မျောက်တွေမှာမရှိတဲ့ အသေးစိတ် ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် လုပ်နိုင်စွမ်း ရှိလာတယ်။ မျောက်တွေဟာ တုတ်တို့ ခဲတို့ကို ကိုင်တွယ်နိုင်ပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် လူ့ရဲ့လက်ကသာ ဒါတွေကို လက်နက်ကိရိယာတွေဖြစ်အောင် ပုံဖော်နိုင်စွမ်းရှိလေတယ်။
ဒီအဆင့်ဟာ ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးမယ့်အဆင့်ဖြစ်တယ်။ နေထိုင်မှု နည်းလမ်းအသစ်တခုကို ဒါက လမ်းဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ လက်နက်ကိရိယာတွေ ကိုင်ဆောင်ပြီး သူဟာ ကိုယ့်အစားအစာကို ယူစားရုံမဟုတ်တော့ဘဲ ထုတ်လုပ်လို့လာတယ်။ သဘာဝက ပေးကမ်းထားတာကို ဆွဲယူရုံမဟုတ်တော့ဘဲ မြေကိုတူး၊ အပင်စိုက်၊ ရေလောင်း၊ အသီးအနှံရိတ်၊ အစေ့တွေကိုကြိတ်၊ မုန့်ဖုတ်လို့လာတယ်။ သူဟာ သဘာဝကို ထိန်းချုပ်ဖို့ လက်နက်ကိရိယာတွေကို သုံးလာတယ်။ သဘာဝကို ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားရင်း သဘာဝဆိုတာ သူ့ဆန္ဒနဲ့ သီးခြားကင်းလွတ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်နိယာမတရားတွေနဲ့ပါလားလို့ သဘောပေါက်လာတယ်။ သင်္ခါရတရားတို့ ဖြစ်ကြ ပျက်ကြပုံကို သိမြင်လာတာနဲ့အမျှ ဒါတွေဖြစ်ပျက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ကိုပါ သိနားလည်လာတယ်။ သဘာဝရဲ့နိယာမတရားတွေရဲ့ ရုပ်ဘဝလိုအပ်ချက်ကို အသိအမှတ်ပြုလာတာနဲ့အမျှ မိမိအလိုကိစ္စပြည့်ဝရေးအတွက် သူတို့ကို အသုံးချနိုင်တဲ့ အစွမ်းသတ္တိကိုပါ ရရှိလို့လာတယ်။ သူတို့ရဲ့ကျေးကျွန်မဟုတ်တော့ဘဲ သခင်ဖြစ်လာပြီးဖြစ်တယ်။
အခြားတဖက်ကလည်း နိယာမတရားတွေရဲ့ရုပ်ပိုင်းလိုအပ်ချက်ကို အသိအမှတ်ပြုဖို့ မစွမ်းနိုင်ဘဲရှိတာနဲ့အမျှ မိမိပတ်ဝန်းကျင်က ကမ္ဘာကြီးကို စိတ်ဆန္ဒစေစားမှုနဲ့ ပြောင်းလဲလို့ရနိုင်တော့မှာလို့ ရှုမြင်လာတယ်။ ဒါဟာ မှော်အတတ်ရဲ့အခြေခံပါပဲ။ မှော်အတတ်ဆိုတာဟာ တကယ့်အတတ်ရဲ့ချွတ်ယွင်းချက်တွေကို အစားထိုးစရာ လှည့်စားတဲ့အတတ်လို့ ဖော်ပြရလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် ဒိထက် တိတိကျကျဆိုရရင် တကယ့်အတတ်ကို စိတ်ပိုင်းအမြင်နဲ့ကျင့်သုံးခြင်းပါပဲ။ မှော်အတတ်နဲ့ စီရင်တယ်ဆိုရာမှာ အရိုင်းအစိုင်းလူတွေဟာ သူတို့ဖြစ်စေလိုတဲ့သဘာဝဖြစ်ရပ်ကို အတုခိုးပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် မိမိတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်ကြခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ မိုးကို လိုချင်ရင် တိမ်တွေစုရုံးနေကြဟန်၊ မိုးချုံးဟန်၊ မိုးတဖွဲဖွဲရွာကျဟန် အတုခိုးပြီး ပြုလုပ်တဲ့အကကို ကကြတယ်။ ဒီတိုင်းပြည်မှာတောင်မှ တချို့တောကျတဲ့နယ်တွေမှာ ရန်သူရဲ့ရုပ်ပုံကို ဖယောင်းနဲ့ပြုလုပ်ပြီး အပ်ကလေးတွေ ထိုးသွင်းတာတို့၊ မီးပေါ်မှာ အရည်ပျော်စေတာတို့ စသဖြင့် ပြုလုပ်တဲ့လူတွေအကြောင်း ရံဖန်ရံခါ ကြားကြရတယ်။ ဒါဟာ မှော်အတတ်ပါပဲ။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့အဖြစ် (မုန်းနေတဲ့သူ သေခြင်း)ကို အတုပြုလုပ်ခြင်းပါပဲ။ (ကိုးကားချက်အညွှန်း ၂။ ။ဂျေ ဘီ ဟယ်ရီဆန် "ရှေးခေတ် အနုပညာနဲ့ကျင့်ထုံး" ၁၉၁၃)
အစပိုင်းမှာ ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးအလုပ်ဟာ စုပေါင်းအလုပ်ဖြစ်တယ်။ လက်တွေအများကြီး အတူစုပေါင်းလုပ်ကိုင်ကြတာပဲ။ အဲဒီလိုအခြေအနေတွေမှာ လက်နက်ကိရိယာတွေ သုံးပြုလာတာကြောင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းအသစ်တခု ဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်။ တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့အော်သံတွေဟာ အင်မတန်ဘောင်ကျဉ်းတယ်။ လူမှာကျတော့ အသံပီမြည်ပြီးလာတယ်။ အလုပ်လုပ်နေတဲ့လူစုရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို ထိန်းကိုင်ပေးတဲ့ နည်းလမ်းတရပ်အဖြစ် အသုံးချပြီး စနစ်တကျ ဖြစ်စေခဲ့ကြတယ်။ ဒီလိုနဲ့ လက်နက်ကိရိယာတွေ တီထွင်ရင်း လူဟာ စကားကိုပါ တီထွင်ခဲ့တယ်။ ဒါမှာလည်း လက်နဲ့ဦးနှောက် အဆက်အသွယ်ကို ကျနော်တို့ တွေ့ကြရပြန်တယ်။
ကလေးငယ်လေးတဦး ကစားစရာ တူတချောင်းကို ကိုင်တွယ်ဖို့ ပထမဆုံးအကြိမ် ကြိုးပမ်းနေပုံကိုကြည့်ရင် ကမ္ဘာဦးဆီက လက်နက်ကိရိယာတွေ ကိုင်တွယ်ဖို့ကြိုးပမ်းကြရာမှာ ဘယ့်ကလောက် စိတ်ဓါတ်အင်အား အသုံးပြုရှာကြရမယ်ဆိုတာကို ခန်ပမှန်းလို့ကြည့်နိုင်တယ်။ သူငယ်တန်း ဂီတအဖွဲ့တခုက ကလေးငယ်တွေလို လူစုဟာ အတူလုပ်ကိုင်ကြရာမှာ ခြေလက်တွေ လှုပ်ရှားတိုင်း၊ တုတ်တွေ ကျောက်ခဲတွေကို ထောင်းထုတိုင်း အားလုံး တညီတညာ ရွတ်ဆိုကြတဲ့ မပီတပီအော်သံနဲ့ စည်းဝါးကိုက်ပေးကြပေလိမ့်မယ်။ အဲဒီလို ပါးစပ်က လိုက်ပေးမှုမပါဘဲ အလုပ်လုပ်လို့ ရမယ်မဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုနဲ့ စကားဟာ ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးလက်တွေ့နည်းလမ်းအဖြစ် ထွက်ပေါ်ခဲ့ရတာပါပဲ။ (ကိုးကားချက်အညွှန်း ၃။ ။ဘီ မာလီနော့စတီး "သန္တာဥယျာဉ်များနဲ့ သူတို့ရဲ့မှော်စွမ်း" ၁၉၃၅ တွဲ ၂၊ စာ ၂၃၂။ စီ ဂျေ အော့ဂ်ဒင်နဲ့ အိုင် အေ ရစ်ချဒ်တို့ရဲ့ "အဓိပ္ပါယ်ရဲ့အဓိပ္ပါယ်" ၁၉၂၇ မှ 'ကမ္ဘာဦးခေတ် ဘာသာစကားများမှ အဓိပ္ပါယ်ပြဿနာ')
လူသားရဲ့ကျွမ်းကျင်မှု တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ ပါးစပ်နဲ့လိုက်ပေးရတာလည်း လက်တွေ့လိုအပ်ချက်အဖြစ်က ရပ်စဲသွားတယ်။ အလုပ်သမားတွေဟာ တဦးချင်း လုပ်ကိုင်နိုင်လာကြတယ်။ ဒါပေမယ့် စုပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုကိရိယာကတော့ ပျောက်ပျက်မသွားဘူး။ တကယ့်အလုပ်ကို မစတင်ခင် ကကြတဲ့ ဇာတ်တိုက်မှုတခုအနေနဲ့ ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။ အရင်က လုပ်ငန်းနဲ့ခွဲခွါလို့ မရစကောင်းတဲ့ စုပေါင်းချိန်ကိုက်ယူရတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ပြန်လည်ကပြကြတဲ့ အကတမျိုးပါပဲ။ ဒါဟာဖြင့် ကနေ့အထိ အရိုင်းအစိုင်းတွေ ကပြလို့နေကြသေးတဲ့ သဏ္ဍာန်တု ကကွက်ပဲပေါ့။
တချိန်ထဲမှာ စကားဟာ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းလာတယ်။ လက်နက်ကိရိယာတွေ ကိုယ်တွယ်ရေးမှာ လိုက်ဖက်လုပ်ရတဲ့ လမ်းညွှန်တခုအဖြစ်နဲ့ စတင်ခဲ့ရာက ကျနော်တို့နားလည်နေတဲ့ ဘာသာစကားမျိုး ဖြစ်လာပါတယ်။ လုံးဝ ပီပီမြည်မြည်ရွတ်ဆိုရတဲ့၊ လုံးဝ အသိနှဲ့ယှဉ်တဲ့ တဦးနဲ့တဦး ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်း ဖြစ်လာတယ်။ သဏ္ဍာန်တုအကမှာတော့ ရွတ်ဆိုရတဲ့အပိုင်းအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေပြီး မှော်အတတ်ဆိုင်ရာကဏ္ဍကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသေးတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဘာသာစကားအားလုံးမှာ ပြောပုံပြောနည်း နှစ်နည်း တွေ့ကြရတယ်။ အချင်းချင်း နေ့စဉ် သာမန်ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းဖြစ်တဲ့ ရိုးရိုးစကားရယ်၊ ပိုမိုလေးနက်ပြီး စုပေါင်းရွတ်ဆိုရတာနဲ့ ပိုမိုသင့်မြတ်တဲ့၊ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့၊ နိမ့်မြင့်သံ ညီညွတ်တဲ့၊ မှော်သဘောပါတဲ့ အသုံးအနှုန်းတခုဖြစ်တဲ့ ကဗျာစကားရယ်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by နေမင်းနီ at Tuesday, March 23, 2010 1 comments Links to this post
Posted by နေမင်းနီ at Monday, November 23, 2009 1 comments Links to this post
Posted by နေမင်းနီ at Friday, November 20, 20090comments Links to this post
Posted by နေမင်းနီ at Monday, November 16, 20090comments Links to this post
ကဗျာဟာ ပြည်သူတွေကြားထဲက ပေါက်ဖွားလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချက်ကို ဂျော့သွမ်ဆန်က အလေးအနက် အခြေအမြစ်ကျကျ စူးစမ်းပြီး ‘မာ့က်စ်ဝါဒနဲ့ကဗျာ’ (ကဗျာသဘောတရား) စာအုပ်မှာ တင်ပြထားပါတယ်။
ကျနော်တို့ ဗမာကဗျာမှာလည်း မူလရင်းမြစ်ဟာ ပြည်သူတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ အလုပ်သမားတွေရဲ့ အလုပ်ခွင်က ကျူးရင့်လိုက်တဲ့ တေးသံတွေ၊ လှေထိုးသားတွေရဲ့ ရိုးဟေးငြာသံတွေကအစ မိခင်တွေရဲ့ သားချော့တေးသံတွေ၊ ကလေးသူငယ်တွေရဲ့ ကစားပျော်ရွှင်ရာကနေ ထွက်လာတဲ့ ဟစ်ကြွေးသံတွေ၊ လယ်ယာချောင်းမြောင်းဆီက သီဆိုကြတဲ့ တေးသံတွေ၊ ဘုရားပွဲ နတ်ပွဲဆီက ကြားရတဲ့ တေးသံတွေ၊ ကာလသားဝိုင်းက အစုနဲ့အဝေးနဲ့ ထိုးလိုက်တဲ့ သံချပ်တွေ၊ ညအခါ လသာသာ တလင်းပြင်မှာ ဖွက်ဆိုကြတဲ့ စကားထာတွေ စသဖြင့် ပြည်သူတွေရဲ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာ ကဗျာတွေ ထွက်ပေါ်တည်ရှိနေတယ်ဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။
ကဗျာဆရာဆိုတာ ပြည်သူတွေရဲ့အသံကို ကိုယ်စားပြုသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေရဲ့ တကယ့်ခံစားရချက်တွေကို အာဝဇ္ဇန်းကောင်းတဲ့ ကဗျာဆရာက သူတို့ကိုယ်စား သီဆိုကျူးရင့်လိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ကျနော်တို့မှာ ‘လက်တန်း ကဗျာစပ်ဆိုမှု’တွေ ရှိတယ်ဆိုတာ အထင်အရှားပါပဲ။ တွေ့ကြုံရတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို ဉာဏ်ကောင်းနှုတ်ရွှင်တဲ့ ကဗျာဆရာက တမုဟုတ်ချင်း ကောက်ကာငင်ကာ စပ်ဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်သေးထဲက စာဆိုကိုင်ဟာ သံချိုကဗျာကို လက်တန်းရွတ်ဆိုရပါတယ်။ ဒါကို ကျနော်တို့ပြည်သူများဟာ အတော်ပွဲကျကြောင်း သိရပါတယ်။
ရုပ်သေးစင်မှာသာ လက်တန်းဉာဏ်ကို တွေ့နိုင်တာမဟုတ်သေးပါဘူး။ ရပ်ထဲ ရွာထဲမှာလည်း အဖြစ်အပျက်အမျိုးမျိုးကို လက်တန်း စာချိုးလေ့ရှိပါတယ်။ အခုထက်ထိ ကျေးလက်တွေမှာဆိုရင် ပြည်သူတွေရဲ့ တကယ့်ဘဝကို လက်တန်းဖွဲ့ဆိုနေတဲ့ ကဗျာဆရာတွေ ရှိပါသေးတယ်။ ဒီလို ကဗျာချိုး စာချိုးကောင်းသူတွေကို ပြည်သူတွေက အလွန်သဘောကျကြပါတယ်။ သားမြေးစဉ်ဆက် အဆင့်ဆင့်ရွတ်ဆိုပြပြီး ပျော်ရွှင်ကြည်နူးကြပါတယ်။ ဝမ်းသာစရာ ဝမ်းနည်းစရာ အဖြစ်အပျက်ဟာ မမေ့နိုင်တော့ဘဲ တသသဖြစ်နေရပါတော့တယ်။
ကျနော်တို့ ရပ်ထဲရွာထဲ လက်ဘက်ရည်ဝိုင်း၊ စကားဝိုင်းမှာ ပြောလေ့၊ ရွတ်လေ့ရှိတဲ့ ဗန်းမော်ဆရာတော်ရဲ့ စာချိုးများ၊ ဗြဲထရော်သူရဲ့ စာချိုး စတဲ့ ကဗျာစာချိုးတွေကိုလည်း အထူးသတိရမိပါတယ်။ ဒါတွေဟာလည်း ကဗျာနဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး ဆက်သွယ်ပုံကို ပြကြပါတယ်။
ကောက်စိုက်သမတေးသံ၊ မောင်းထောင်းတေးသံ စတဲ့ ကျေးလက်ပြည်သူ့ကဗျာတွေကိုကြည့်ရင် ပြည်သူတွေရဲ့ ဘဝအထွေထွေကို သီကျူးထားတဲ့သဘောကို တွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ ကျေးလက်ပြည်သူ့ကဗျာတွေဟာ အလွန်ဆေးရောင်စိုပါတယ်။ ကျူးရင့်လို့ မဝနိုင်အောင် အရသာခံစားရပါတယ်။ ဒါဟာဘာလဲဆိုရင် ဒီကဗျာတွေထဲမှာ ပြည်သူ့ဘဝ အသက်ရှင်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လှုပ်ရှားနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ဟာ ဗမာကဗျာကို လေ့လာတယ်ဆိုရင် နန်းတော် အိမ်တော်မှာ ကျူးကြ၊ သီကြတဲ့ ပျို့ကဗျာကြီးတွေကိုသာ လေ့လာရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ရပ်ထဲရွာထဲမှာ အဖူးအညွန့်တဝေဝေနဲ့ လှုပ်ရှားနေတဲ့ တေးကဗျာလေးတွေကိုပါ စုဆောင်းလေ့လာရပါလိမ့်မယ်။ စက္ကူ ပေပုရပိုက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ တေးကဗျာတွေကိုသာ လေ့လာရမှာမဟုတ်သေးဘဲ၊ အလေ့ကျပေါက်နေတဲ့ သဘာဝတေးကဗျာတွေကိုပါ လေ့လာရပါလိမ့်မယ်။ ဒီကဗျာတွေကသာလျှင် မူလဘူတအပီမြည်ဆုံး ကဗျာစုမည်ပေလိမ့်မယ်။
ဗမာလူမျိုးဟာ ကဗျာကို အတော်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာ အထူးရှင်းပြစရာမလိုပါဘူး။ ဗမာစာပေသမိုင်းတလျှောက်လုံးမှာ ကဗျာအဖွဲ့အနွဲ့က အထွန်းကားဆုံးဖြစ်နေတာကို ထောက်နိုင်ပါတယ်။ ကဗျာလေ့လာသူတွေလည်း အလွန်ပေါပါတယ်။ ဗမာစာပေလေ့လာတယ်၊ ပို့ချတယ်ဆိုတာ ကဗျာကို လေ့လာတယ်၊ ပို့ချတယ်ဆိုရမလောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းတွေ တက္ကသိုလ်တွေမှာရော၊ အရပ်ထဲမှာပါ ကဗျာကို လေ့လာသူတွေ အနန္တပါပဲ။
ဒါပေမယ့် အများအားဖြင့် ကဗျာကို လေ့လာတယ်ဆိုတာရှိပြီး-အဆင့်မြင့်ပြီး ကဗျာစုရဲ့ ဂုဏ်တွေ၊ ဒေါသတွေ၊ ဂိုဏ်းတွေ၊ ရသတွေ၊ ဘာဝတွေကို မှတ်မိအောင်လုပ်တာလို့ ကျနော်တို့ နားလည်နေကြပါတယ်။ ပါမောက္ခ ဂျော့သွမ်ဆန်က ကျနော်တို့ကို ကဗျာလေ့လာနည်းလမ်းသစ် ပေးအပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဘာလဲဆိုရင် ကဗျာကို လေ့လာချင်ရင် သိပ္ပံနည်းကျကျလေ့လာပါ၊ ပြည်သူတွေထံမှာ လေ့လာပါဆိုတာပါပဲ။
တဆက်တည်းမှာပဲ ကဗျာရဲ့ ရှေ့အလားအလာ အနာဂတ်ဟာ ဘယ်လိုရှိမလဲ? သူ့ဒုံရင်းဖြစ်တဲ့ ပြည်သူတွေဆီကိုပဲ ဦးတည်ရမယ်လို့ ဂျော့သွမ်ဆန်က ထောက်ပြထားပါတယ်။ ပြည်သူတွေထဲမှာ ပေါက်ဖွားလာခဲ့ရတဲ့ကဗျာဟာ ခု ပြည်သူတွေနဲ့ အဆက်ပြတ်နေခဲ့ရတယ်။ ဒါ မဖြစ်သင့်ဘူး။ ပြည်သူတွေဆီ ပြန်ရောက်ရမယ်။ အဲဒီလို ရောက်အောင် ပို့ပေးဖို့ရာ ဒီနေ့ကဗျာဆရာသစ်တွေရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်လို့ ပါမောက္ခက ညွှန်ပြထားပါတယ်။
ပါမောက္ခ ဂျော့သွမ်ဆန်ရဲ့ ဒီစာအုပ်ဟာ ကျနော်တို့ ဗမာကဗျာလောကအတွက် အားသစ်တရပ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ဥရောပကဗျာနဲ့ ကျနော်တို့ဗမာကဗျာ ပုံတူမကျပေမယ့် လေ့လာပုံ လေ့လာနည်း အသစ်ရစေပါတယ်။ ဘာသာစကား မတူသော်လည်း အခြေခံ ကဗျာ့သဘောကတော့ ကွဲလွဲစရာမရှိပါဘူး။ ထပ်တူထပ်မျှပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကဗျာသဘောကို အမြင်သစ်နဲ့တင်ပြတဲ့ ဂျော့သွမ်ဆန်ရဲ့စာကို ကျနော်တို့ သမရိုးကျ ကဗျာသမားတွေအဖို့ ပထမတော့ ‘လိုက်’နိုင်ဖို့ ခဲယဉ်းကောင်း ခဲယဉ်းပါလိမ့်မယ်။ နားစိမ်းကောင်း စိမ်းနေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဗမာကဗျာနဲ့ အသွင်မတူတဲ့အချက်တွေကို မတူသလိုရှုမြင်ပြီး တူတာကို တူသလို ချင့်ချိန်တတ်ရင် သူ့စာကို ကောင်းကောင်း ‘လိုက်’နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဗမာကဗျာကို ဘယ်လိုလေ့လာရင် ကောင်းမလဲလို့ နည်းသစ်ကိုလည်း တွေးမိလာပါလိမ့်မယ်။
ဗမာကဗျာလောကထဲကို လေ့လာရေးနည်းသစ်တခု ရောက်ရှိလာတာဟာ ဝမ်းသာစရာပါပဲ။ ဒီအတွက် ကျေးဇူးတင်ထိုက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ ပါမောက္ခဂျော့သွမ်ဆန်နဲ့ ဘာသာပြန်သူ မောင်သာနိုးတို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ။
၂၇၊ ၃၊ ၁၉၆၆
(ဆက်လက်ဖော်ပြသွားပါမယ် - နေမင်းနီ)
Posted by နေမင်းနီ at Friday, November 13, 20092comments Links to this post
နိုင်ငံရေးသမားလို အများအကျိုးကို ထမ်းဆောင်ရသူတဦးဟာ စာပေအနုပညာများကို မြတ်နိုးသူမဟုတ်ရင် နည်းနည်းစိုးရိမ်ရပါတယ်။ စာပေအနုပညာများကို မမြတ်နိုးသူဟာ “ရုပ်ကြမ်းသမား” တွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ရုပ်ကြမ်းသမားဆိုတာ စိတ်နှလုံးမနူးညံ့တဲ့၊ စာနာထောက်ထားမှုမရှိတဲ့၊ ခံစားမှုမဲ့တဲ့လူမျိုးကို ဆိုလိုပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ စာပေအနုပညာများကို မြတ်နိုးတဲ့ နိုင်ငံရေး သမားတဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို မြတ်နိုးသူ၊ အကြမ်းနည်းနဲ့ ပြဿနာဖြေရှင်းတာကို မနှစ်သက်သူဖြစ်နေတာလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ သာမန်အားဖြင့်လည်း ပညာတတ်လူယဉ်ကျေးဆိုတာမျိုးဟာ စာပေအနုပညာများကို လေးစားရ၊ မြတ်နိုးရ၊ တန်ဖိုးထားရမြဲမဟုတ်ပါလား။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဆိုရင် ခဏတဖြုတ်လောက်ပဲ အချိန်အားရရင်ပဲ သူ့အနီးအပါးမှာ ဆရာဒဂုန်တာရာ ရှိလို့ကတော့ စန္ဒယားတီးခိုင်းတော့တာပါပဲ။ တခါတရံ မဆိုတတ်ဆိုတတ်နဲ့ သီချင်းဝင်ဆိုတတ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ ကိုယ်တိုင် စန္ဒယားတီးပြီး ဂီတနဲ့ မွေ့လျော်လေ့ရှိသူ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကျနော် စတင်တွေ့ဆုံဖူးတာက ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောင်လည်း စာကြည့်တိုက်မှာပဲ ဆုံရတာ များပါတယ်။ အချိန်ရှိသရွေ့ စာပေမှာ မွေ့လျော်သူတဦးဖြစ်ကြောင်း ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်က ကဗျာဆရာတဦးဖြစ်လို့ ကဗျာဆရာတဦးအနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဘယ်လိုမြင်သလဲဆိုတာ နည်းနည်းတင်ပြချင်ပါတယ်။ ဒေါ်စုဘက်ကလည်း ကဗျာဆရာများအပေါ်မှာ ဘယ်လိုမြင်တယ်ဆိုတာကိုလည်း ကျနော်တို့ ဖြတ်သွားဖြတ်လာ တွေ့ဆုံရင်းနဲ့ အကဲခတ်သိရှိရသမျှကို တင်ပြချင်ပါတယ်။
ထူးခြားချက်တခုကတော့ ဒေါ်စုအနေနဲ့ ဗမာပြည်မှာ လူထုလှုပ်ရှားမှုထဲကို ပါဝင်လာပြီးတာနဲ့ သိပ်မကြာဘူး။ မြန်မာ စာပေလောကထဲက ကဗျာဆရာတွေ အားလုံးလောက်နဲ့ သိကျွမ်းရင်းနှီးပြီး ဖြစ်နေခဲ့ပြီဆိုတာပါပဲ။ ဗမာပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီအရေးအခင်းကြီး ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့အခါ ပြည်သူအားလုံးနဲ့အတူ ကဗျာဆရာတွေ အားလုံးလည်း ထောက်ခံ ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဆန္ဒပြလက်မှတ်ကောက်ခံတဲ့အခါမှာ အသက်အကြီးဆုံး စာဆိုကြီး နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ခေတ်စမ်း စာဆိုကြီးနှစ်ဦးက အဦးဆုံး လက်မှတ်ထိုးပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံ ဖြစ်စမှာပဲ ကဗျာဆရာကြီး ဇော်ဂျီက ကျန်းမာရေးချို့တဲ့လာခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ထဲမှာပဲ တွန်းလှည်းပေါ်မှာ နေထိုင်ရွေ့လျားခဲ့ရပါတယ်။ မကြာခင် အိပ်ရာပေါ်မှာပဲ နေရတဲ့ အခြေအနေကို ရောက်ပြီး ကွယ်လွန်သွား ခဲ့ပါတယ်။
ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ်ကတော့ ကမာရွတ်အ၀ိုင်းမှာ နေ့ရော ညပါ လေထဲမိုးထဲ အစာငတ်ခံဆန္ဒပြကြတဲ့ ကျောင်းသား လူငယ်တွေကို မျက်ရည်စက်လက်နဲ့ ထွက်ပြီး အားပေးနိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ “ငါ့မျက်ရည် မထိန်းနိုင်လို့” ဆိုပြီး အိမ်ပြန်သွားပါတယ်။ အိမ်မှာ ကဗျာတပုဒ်ရေးဖွဲ့ ကျနော့်လက်ထဲကို ထည့်လိုက်ပါတယ်။ လူငယ် သူရဲကောင်းတွေကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ကဗျာပါ။ ကျနော်ကိုပဲ ဖတ်ပြပေးပါလို့ တာဝန်ပေးလို့ ပရိသတ်ရှေ့ကို သွားရောက်ဖတ်ပြရတဲ့အခါ ပရိသတ်က အကြိမ်ကြိမ်ထပ်ပြီးဖတ်ခိုင်းပါတယ်။ အလွန်အားတက် ဂုဏ်ယူကြ ပါတယ်။ (ပရိသတ်ထဲမှာ ကဗျာဆရာ ပုတီးကုန်း မောင်စိန်ဝင်းနဲ့ ပျဉ်းမနား မောင်နီသင်းလည်း ပါပါတယ်။) အဲဒီကဗျာကိုတော့ အမေလူထု ဒေါ်အမာက လှမ်းတောင်းလို့ တယ်လီဖုန်းပေါ်မှာ နှုတ်နဲ့ပဲ ရွတ်ဆိုပြီး ပို့ပေးလိုက်ရပါတယ်။ ပြီးတော့ မန္တလေးကထုတ်တဲ့ ရှစ်လေးလုံးဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်ဟာ တရားရိပ်သာတခုကို ၀င်ဖို့ ပြင်ဆင်နေဆဲပါ။ ဒါပေမယ့် “ငါ့သူငယ်ချင်းရဲ့ သမီးကို ငါမျက်နှာလွှဲနေလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ” လို့ဆိုပြီး ဒေါ်စုကို ထောက်ခံအားပေးခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၃၆ က ကိုအောင်ဆန်းတို့ သပိတ်မှောက်တော့ ဆရာမင်းသုဝဏ်က တက္ကသိုလ်မှာ ဆရာဖြစ်နေပါတယ်။ ကိုအောင်ဆန်းတို့ရဲ့ ဆရာပါ။ ဒါပေမယ့် ဆရာက သူငယ်ချင်းလို့ပဲ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ခေတ်စမ်းစာဆိုကြီးနှစ်ဦးဟာ ဖခင်လက်ထက်မှာရော၊ သမီးလက်ထက်မှာပါ အုပ်စိုးသူများကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဆန့်ကျင်အန်တုပြီး အမှန်တရားဘက်က ထောက်ခံရပ်တည်ခဲ့ကြ ပါတယ်။
ခေတ်စမ်းစာဆိုတဦးဖြစ်ခဲ့ပြီး ကိုအောင်ဆန်းနဲ့လည်း ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့သူ ကဗျာဆရာ ဒဂုန်တာရာဟာ စစ်ပြီးခေတ်မှာ ပြည်သူ့စာပေခေတ်ကို ဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ စာဆိုတာရာကလည်း သူ့သူငယ်ချင်းရဲ့သမီးကို အားပေးထောက်ခံပါတယ်။ “နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ ရန်သူကို မိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်း ဖြစ်တယ်” ဆိုတဲ့ ဂန္ဓီ၊ မင်ဒဲလား လမ်းစဉ်ကို စွဲကိုင်ကြေညာရင်း ဒေါ်စုဘက်က ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။
ရှင်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကာလမှာ မန္တလေးက ဆင်းလာခဲ့ကြတဲ့ ကျနော်တို့ စာပေသမား သူငယ်ချင်းတစုဟာ အားလုံး ဒေါ်စုကို ၀န်းရံခဲ့ကြပါတယ်။ မုံရွာတင်ရွှေ၊ ပေါ်ဦး၊ ၀င်းဖေ၊ တင်မိုး၊ မောင်မိုးသူ၊ မောင်သာနိုး၊ မောင်စွမ်းရည်တို့တတွေ “တတ်သိအဖွဲ့” ဖွဲ့တော့ စုဝေးပါဝင်ကြပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက အခမ်းအနားသဘာပတိ လုပ်သူဟာ ကဗျာဆရာတင်မိုးပါ။ ကဗျာဆရာတဦးက ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားခဲ့တာကို သမိုင်းတင်ထားရ ပါလိမ့်မယ်။
ကဗျာဆရာတင်မိုးကိုတော့ “ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံစာဆို” လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ အရေးတော်ပုံကာလ တလျှောက်လုံး ကဗျာတွေ ရေးဖွဲ့၊ ရွတ်ဆိုဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ အဖွဲ့ချုပ်က ထုတ်သမျှ လက်ကမ်းစာစောင်တွေ မှာလည်း ကဗျာနဲ့ ပါဝင်ရေးဖွဲ့အားပေးခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဒေါ်ခင်ကြည်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ အကြောင်းကို ဖွဲ့ဆိုဂုဏ်ပြုကဗျာတွေ အများဆုံးရေးဖွဲ့ခဲ့သူဟာလည်း တင်မိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကဗျာဆရာတင်မိုးဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ အရင်းနှီးဆုံး ကဗျာဆရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အရေးတော်ပုံကာလ အရေးအကြီးဆုံးအချိန်တွေမှာ မုံရွာတင်ရွှေ၊ ဦးဝင်းတင်၊ ဗိုလ်သော်က၊ မောင်မိုးသူ စတဲ့ စာပေးသမားများနဲ့အတူ တိုင်ပင်ဖော်တိုင်ပင်ဖက်အဖြစ်နဲ့ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
ကဗျာဆရာတင်မိုးနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဟာ အရေးတော်ပုံမတိုင်မီကာလကတည်းက သိကျွမ်းရင်းနှီးခဲ့ ပါတယ်။ တင်မိုးက ဒေါ်စုကို ရန်ကုန်မြို့ထဲက လမ်ဘေးစာအုပ်အဟောင်းဆိုင်တွေကို တနေကုန် ဘာမှ မကျွေးဘဲ ခေါ်သွားခဲ့ဖူးတာဟာ အမှတ်တရပြောစရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်စုက “ဆရာမိုးရေ ကျမတော့ ဆာပြီ” ဆိုမှ သတိရပြီး လမ်းဘေးခေါက်ဆွဲသုပ်ဆိုင်တဆိုင်ကို ခေါ်သွားသတဲ့။ ဒေါ်စုကလည်း လမ်းဘေး အသုပ်ဆိုင်မှာပဲ မြိန်ရေရှက်ရေ စားရှာပါသတဲ့။ ဒီလိုနဲ့ စာအုပ်ရှာတာ တနေကုန်သွားခဲ့ပါတယ်။
ကဗျာဆရာကြည်အောင်နဲ့ ကိုလေး (အင်းဝဂုဏ်ရည်) တို့နှစ်ဦးကတော့ အညာမှာပဲ နေကြတာဖြစ်လို့ အရေးတော်ပုံကာလမှာ ကျနော်တို့နဲ့ မဆုံနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ ရန်ကုန်မှာ ဒေါ်စုကို အနီးကပ် မ၀န်းရံနိုင်ဘဲ အဝေးကပဲ ၀န်းရံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမျိုးသားနေ့လို အခါကြီးရက်ကြီးတွေမှာ ကြည်အောင်နဲ့ကိုလေးတို့ နှစ်ဦးကို ရန်ကုန်ရုံးချုပ်မှ ဖိတ်ခေါ်ပြီး ဟောပြောစေပါတယ်။ ဒီကဗျာဆရာနှစ်ဦး သူများနဲ့မတူတာက မန္တလေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းထွက်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့အတွက် ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းရဲ့ လေးချိုးကြီးလိုဟာမျိုးကအစ ရတု၊ ရကန်၊ အဲ၊ အန် တွေကို စနစ်တကျ ရွတ်ဆိုတတ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ရွတ်ဆိုဟောပြောတာတွေကို ဒေါ်စုကအစ အဖွဲ့ချုပ်က ရဲဘော်ရဲဘက်တွေက အထူးသဘောကျကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့နှစ်ဦးကိုပဲ နှစ်စဉ်ဖိတ်ကြားလေ့ရှိပါတယ်။ ဒေါ်စုက သူတို့ကို နိုင်ငံခြားက စာအုပ်တွေမှာပြီး လက်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ကဗျာဆရာအောင်ဝေးကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် တာဝန်ပေးချက်အရ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ စည်းရုံးရေးကိစ္စတွေကို ဆောင်ရွက်ရသူဖြစ်ပါတယ်။ “ကိုအောင်ဝေးရေ ဒေါ်စုနဲ့ ကဗျာအကြောင်း စာအကြောင်း လေးများ ဆွေးနွေးဖြစ်တာရှိရင် ဒို့များလည်း မှတ်သားရအောင် ဖောက်သည်ချပါဦး” လို့ ပြောဖူးပါတယ်။ “ဆရာရေ- ဆုံဖြစ်ကြတာတွေက အဖွဲ့ချုပ်ကိစ္စတွေနဲ့ချည်းဆိုတော့ ကဗျာအကြောင်း စာအကြောင်း မပြောဖြစ်ပါ ဘူး” လို့ ပြန်ဖြေပါတယ်။ ကျနော်ကပဲ ကျနော်တို့နဲ့ ပြောဖူးတာလေးတွေကို ဖောက်သည်ချရပါတယ်။
အရေးတော်ပုံကာလမှာ တင်မိုးက အစိုးရအလုပ်က အငြိမ်းစားယူပြီးပါပြီ။ ကျနော်ကတော့ အရေးအခင်းအပြီးမှာ ရုံးကို ပြန်တက်နေပါတယ်။ ပြီးမှစောပြီး အငြိမ်းစားယူလိုက်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူ့ရုံး၊ သူ့ခြံထဲမှာ အလုပ်ရှုပ်နေလို့ ကဗျာဆရာတွေနဲ့ အလ္လာပသလ္လာပပြောဖို့ အချိန်မရရှာပါဘူး။ လမ်းဘေးဟောပြောပွဲတွေ လုပ်တာကိုတော့ ကျနော်တို့ မပြတ်သွားနားထောင်ပါတယ်။ ဒေါ်စု သာရေးနာရေးတွေကို ထွက်လာတဲ့အခါ မှာလည်း ဆုံဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ်တို့၊ ဦးခင်မောင်လတ်၊ ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်တို့ရဲ့ ထမနဲပွဲတွေမှာ အမြဲလာပါတယ်။ အဲလိုအခါတွေမှာ ကဗျာဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာနဲ့ရော၊ ကျနော်တို့နဲ့ရော ဆုံခွင့်ကြုံရပါတယ်။
ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း၊ လေထီးဦးအုန်းမောင်၊ ဗိသုကာ ဦးကျော်မင်း၊ တိုင်းစည်းရုံးရေးမှူး ဦးသိန်းတင်၊ မုံရွာ ဦးတင်ရွှေ၊ ဟာဂျီဦးမြသန်း၊ စာရေးဆရာ မြသန်းတင့် စတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများရဲ့ ကွယ်လွန်နှစ်ပတ်လည်ပွဲတွေ မှာလည်း မပျက်မကွက် လာလေ့ရှိပါတယ်။ အဲလိုလာတဲ့အခါ ဒေါ်စုနဲ့အတူ ဦးတင်ဦး၊ ဦးကြည်မောင်၊ သခင်အုန်းမြင့်တို့ သုံးဦးကတော့ အမြဲပါလေ့ရှိပါတယ်။
မုံရွာတင်ရွှေက ကျနော်တို့ရဲ့ ရဲဘော် သူငယ်ချင်းပါ။ မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ခေါင်းဆောင် ဟောင်းပါ။ ဒါကြောင့် တင်မိုး၊ မောင်သာနိုး၊ မောင်မိုးသူ၊ မောင်ပေါက်စည် (မန်းတက္ကသိုလ်) ခေါ် ခရစ်ယာန် သာသနာပိုင်ချုပ် အင်ဒရူး မြဟန် စတဲ့ ငယ်ပေါင်းရဲဘော်များက မပျက်မကွက် စုံစုံညီညီသွားလေ့ရှိပါတယ်။ တခါတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့အဖွဲ့က မုံရွာ ဦးတင်ရွှေရဲ့အိမ် (အင်းစိန်၊ နံ့သာကုန်း)ရဲ့ အပေါ်ထပ်မှာ အစောကြီး ရောက်နှင့်နေတယ်။ ကျနော်တို့အဖွဲ့က နောက်ကျရောက်ပြီး အောက်ထပ်မှာပဲ စကားဝိုင်းဖွဲ့နေကြပါ တယ်။ ခဏနေတော့ ရဲဘော်တယောက် ရောက်လာပြီး ကျနော်တို့ကို “အပေါ်ကြွပါ” လို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ အပေါ်တက်သွားတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ရဲ့ စားပွဲဝိုင်းက သခင်အုန်းမြင့်က လှမ်းပြီး လက်ယက် ခေါ်ပါတယ်။ သူနဲ့အဖွဲ့ဝင်လူကြီးတချို့က ထပေးပြီး ကျနော်တို့တဖွဲ့လုံးကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ စကားပြောကြဖို့ ဆုံပေးပါတယ်။ ဒီလို စကားဝိုင်းဖွဲ့ခွင့်မျိုးကို သခင်အုန်းမြင့်က မကြာခဏ လုပ်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။
ကျနော်တို့တတွေ ဒေါ်စုနဲ့ ဆုံမိကြတဲ့အခါ တခါမှ နိုင်ငံရေးစကား မပြောဖြစ်ကြပါဘူး။ နိုင်ငံရေးအကြောင်းအရာ အနေနဲ့ ထူးပြီးပြောစရာလည်း မရှိပါဘူး။ နိုင်ငံရေးအသိအမြင်ကလည်း ခြားနားတာရှိကြတာမှ မဟုတ်ဘဲကိုး။ ဒါကြောင့် စာကြောင်းပေကြောင်းလောက်ပဲ ပြောဖြစ်ပါတယ်။ မုံရွာ ဦးတင်ရွှေရဲ့ အဲဒီနှစ်လည်ပွဲမှာ ထူးထူးခြားခြား ပြောမိကြတာကို ခေါင်းစဉ်တပ်ရရင် “ကဗျာဆရာများနဲ့ နိုင်ငံရေး” လို့ တပ်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒေါ်စုက ကျနော်တို့ ကဗျာဆရာတွေကို ကြည့်ပြီး “နိုင်ငံမှာ အရေးရယ်လို့ ကြုံလာရင် ကဗျာဆရာတွေဟာ ဘယ်တော့မဆို ရှေ့ကရောက်လာပြီး ပါဝင်ဆင်နွှဲကြလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒါဟာ ကဗျာဆရာတွေရဲ့ ထူးခြားချက်လို့ ကျမတော့ ထင်မိတယ်။ ဆရာတို့ ဘယ်လိုသဘောရသလဲတဲ့။ ဒီပွဲမှာ ကျနော့်ထက် အသက်လည်းကြီး၊ ၀ါလည်းကြီးတဲ့ ကဗျာဆရာ သုံးဦးပါဝင်နေပါတယ်။ တင်မိုး၊ မောင်ပေါက်စည်(မန်းတက္ကသိုလ်) နဲ့ မောင်သာနိုးတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့အဖြေကို စောင့်နေရပါတယ်။ အတန်ကြာငြိမ်နေတော့ တင်မိုးက “ခင်ဗျားပြောလိုက်ပါ” လို့ ကျနော့်ကို လှည့်ပြီး ပြောလိုက်ပါတယ်။
ကျနော့်အနေနဲ့ကလည်း အဖြေကို သိပ်စဉ်းစားချိန်မရပါဘူး။ ကိုယ်ဘာဖြေရဖို့လည်း အသင့်ပြင်မထားပါဘူး။ ခုလို တင်မိုးက မေးထိုးပြီး ခိုင်းလိုက်တော့ ပြောလိုက်ရပါတယ်။ “ကျနော်တို့ ခေတ်သစ် ဗမာစာပေလောကမှာ ရှေ့ဆုံးက ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းရှိပါတယ်။ ဆရာကြီးက နိုင်ငံမှာ အရေးကြုံတိုင်း ရှေ့ဆုံးက ပါခဲ့ပါတယ်။ “အရေးကြီးရင်၊ သွေးနီးရာပါစမြဲ” လို့ ကြွေးကြော် ၀င်ရောက်လာလေ့ရှိပြီး လေးချိုးကဗျာကြီးတွေနဲ့ ပါဝင်ဆင်နွှဲလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒီအစဉ်အလာအရ ကဗျာဆရာဆိုတာ နိုင်ငံရေးမှာ ပါရမယ်လို့ စွဲမြဲ ယုံကြည်ထားကြပါတယ်။ ဒါဟာ ဆရာကြီး ချမှတ်စိုက်ထူခဲ့တဲ့ အစဉ်အလာပါ” လို့ ဖြေကြားလိုက်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မျက်နှာပေါ်မှာ ဘ၀င်ကျသွားတဲ့ လက္ခဏာ မပေါ်လာပါဘူး။ “ဆရာ၊ အဲဒါလည်း မှန်ပါ တယ်။ ဒါက ဗမာပြည်ရဲ့ အစဉ်အလာဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျမက နိုင်ငံတကာရဲ့ အစဉ်အလာကို ပြောလိုတာပါ။ နိုင်ငံတိုင်းမှာလိုလိုပဲ ကျမ သတိပြုမိတာက အရေးကြုံရင် ကဗျာဆရာတွေ ရှေ့ဆုံးက ပါဝင်လာကြတာပဲ။ အဲဒါ ထူးခြားတယ်လို့ ကျမထင်လို့ပါ။ အဲဒါကို ဆရာတို့ ဘယ်လိုသဘောရပါသလဲ” တဲ့ ထပ်ပြီး ဆွေးနွေးလိုက်ပါတယ်။
ကျနော့်ဦးနှောက်ထဲမှာ ယိတ်(ခ်)၊ အော်ဒင်၊ မာယာကော့ဖ်စကီး၊ လူရွှင့်၊ တဂိုး စတဲ့ ကဗျာဆရာကြီးတွေရဲ့ နာမည်တွေနဲ့ သူတို့ကဗျာတွေ ပဲ့တင်ထပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကဗျာဆရာတွေထဲက ဘယ်သူမှ ရုတ်တရက် ၀င်မဖြေဖြစ်ကြပါဘူး။ ဒီမှာတင် မမျှော်လင့်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တဦးက ၀င်ပြီး “ကျနော်က ကဗျာဆရာမဟုတ်ပေမယ့် အဖြေတခု ပြောကြည့်ချင်ပါတယ်” လို့ ခွင့်တောင်းလာပါတယ်။ ကျနော်တို့အားလုံးကလည်း ၀မ်းပန်းတသာနဲ့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
“ဒီလိုပါ။ ကဗျာဆရာ စတဲ့ အနုပညာရှင်တွေဟာ အမှန်တရားကို ရှာဖွေသူတွေ၊ အမှန်တရား သစ္စာတရားကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာ အရေးအခင်းတခု ကြုံရရင် အမှားဘက်၊ အမှန်ဘက် ဆိုတာ ရှိစမြဲပါပဲ။ ဒီအခါမှာ အမှန်တရားဘက်ကနေပြီး ကဗျာဆရာတွေက ရှေ့ဆုံးက ၀င်ပါလာကြတယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်” တဲ့။ ကျနော်တို့အားလုံးက ၀မ်းပန်းတသာနဲ့ ဒီအဖြေကို သဘောတူလိုက်ကြပါတယ်။ ဖြေဆိုသူက ဗိုလ်ချုပ်တင်ဦး။ စစ်သားကြီး တင်ဦးပါ။ သူလည်း အမှန်တရားကို ကိုးကွယ်သူပါ။
နိုင်ငံမှာ အရေးကြုံရင် ကဗျာဆရာများရော၊ စစ်ဗိုလ်စစ်သားများပါ အမှန်တရားဘက်က ၀ိုင်းရံလေ့ရှိကြပါတယ်။ အမှန်တရားကို မြတ်နိုးသူတိုင်း ဒေါ်စုကို ဆက်လက်ဝန်းရံကြပါစို့။ ဒေါ်စု ကျန်းမာပါစေ၊ အန္တရာယ်လည်း ကင်းပါစေ လို့ ကဗျာဆရာများက ဆုတောင်းလိုက်ပါကြောင်း။ ။
၂၂၊ ၆၊ ၂၀၀၉
Posted by နေမင်းနီ at Tuesday, June 23, 20094comments Links to this post
သူကား လှိုင်းဟု ခေါ်သတည်း…။ ။
(‘မုန်တိုင်းနီ’ကဗျာစာအုပ် ၁၉၆၃ မှ)
Posted by နေမင်းနီ at Tuesday, June 23, 20090comments Links to this post
၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ ဇွန် ၆ အလုပ်သမားသပိတ်ကြီးရဲ့ နှစ်ပတ်လည်အဖြစ် ၁၉၇၅ ခု၊ ဇွန် ၆ ကျောင်းသားသပိတ်ကြီးကို ကျောင်းသားတစုက စတင်ဖော်ထုတ်ဆင်နွှဲလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ တဖက်မှာ ပြည်သူလူထုကြီးတရပ်လုံးရဲ့ စားဝတ် နေရေးအကြပ်အတည်းတွေ တနေ့တခြား ကြီးမားနက်ရှိုင်းလာနေတုန်း၊ တဖက်မှာ စစ်အစိုးရရဲ့ ရက်ရက်စက်စက် ဖိနှိပ်သတ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့် အလုပ်သမား သွေးမြေကျရမှုတွေ၊ ကျောင်းသား သွေးမြေကျရမှုတွေ ဆက်တိုက်ကြီး လိုလို ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး နာကျည်းခါးသီးဖွယ်ရာတွေ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကြီး ခံစားနေရတုန်းမှာ စစ်အစိုးရရဲ့ ဖောက်ပြန်ရက်စက်တဲ့ အုပ်စိုးမှုကို လက်မခံနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြလိုက်ကြတဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်ရေး တိုက်ပွဲ လမ်းကြောင်းကို ထပ်လောင်းတွန်းတင်နိုင်ဖို့ အားထုတ်လိုက်ကြတဲ့ ကျောင်းသားထုရဲ့ အံတုစိန်ခေါ်ပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ၇၄ ဇွန် ၆ အလုပ်သမားသပိတ်ကြီးနဲ့ ၇၄ ဒီဇင်္ဘာ ဦးသန့်အရေးအခင်းကြီးဟာလည်း ၆ လပဲ ကွာခြားသလို ဦးသန့်အရေးအခင်းနဲ့ ၇၅ ဇွန် ၆ ကျောင်းသားသပိတ်ကြီးဟာလည်း ၆ လခန့်ပဲ ကွာခြားခဲ့ပါတယ်။
၁၉၇၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့မနက် တက္ကသိုလ်နယ်မြေထဲမှာ ကျောင်းသားတွေ စုစည်းကြပြီး ကျောင်းဝင်းထဲကနေ ကျောင်းပြင်အထိထွက်ပြီး စီတန်းလှည့်လည်ဆန္ဒပြပွဲကြီးနဲ့ စတင်ဖော်ထုတ်လိုက်ကြပါတယ်။ ပညာရေးတက္ကသိုလ်ဝင်း အပေါက်ကနေ ထွက်လာပြီး ပြည်လမ်းမကြီးအတိုင်း ရန်ကုန်မြို့ထဲဆီ ဦးတည်ကြွေးကြော် ချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အသံ လွှင့်ရုံရှေ့ကနေ ဖြတ်လာခဲ့ပြီး ကြံတောဘက် ချိုးကွေ့တဲ့လမ်းအတိုင်း ဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကြံတောရှေ့က အသုဘခေါင်း ရောင်းတဲ့ဆိုင်တခုထဲ အခေါင်း ၂ ခုကို ရယူခဲ့ပြီး တခေါင်းကို ‘နေဝင်း’လို့ ကမ္ဗည်းထိုး၊ တခေါင်းကို ‘စန်းယု’လို့ နာမည်တပ်ကာ ကြိုးနဲ့ဆွဲခဲ့ကြပါတယ်။ အောက်ဖက်လမ်းအတိုင်း ဆက်လက်ချီတက်ကြကာ အဲဒီကမှ မြို့လည် ဗန္ဓုလ ပန်းခြံရှေ့ဆီ ချီတက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းတလျှောက် “နေဝင်း-စန်းယု စစ်အစိုးရ - အလိုမရှိ”၊ “ဖမ်းဆီး အလုပ်သမား၊ ကျောင်းသား၊ ရဟန်းသံဃာတော်များ ပြန်လွှတ်ရေး - ဒို့အရေး”ဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံတွေ တခဲနက် ကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဗန္ဓုလပန်းခြံရှေ့မှာ နေဝင်းနဲ့စန်းယုကို အမိန့်တော်ပြန်ပြီး အခေါင်းနှစ်လုံးကို မီးရှို့ ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
နောက်တနေ့မှာ RIT (စက်မှုတက္ကသိုလ်)ဝင်းထဲ လူစုပြီး စက်မှုတက္ကသိုလ်ကနေ အင်းစိန်ထောင်ကြီးဆီ သွားရောက် ခဲ့ကြပြီး ထောင်ကြီးရဲ့ နံရံတလျှောက် လှည့်လည်ချီတက်ဝိုင်းရံကာ ဆန္ဒပြကြွေးကြော်သံတွေ ပဲ့တင်ထပ်စေခဲ့ပါတယ်။ “အင်းစိန်ထောင်ကြီး ကျယ်တယ်ဆို - ထပ်ချဲ့လိုက် ထပ်ချဲ့လိုက်”ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်သံတွေ သောသောညံခဲ့ပါတယ်။
ပထမမှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမအတွင်းမှာပဲ သပိတ်စခန်းပြုကာ စစ်အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးတရားပွဲတွေ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ရွှေတိဂုံကုန်းတော်ပေါ် စခန်းပြောင်းပြီး သပိတ်ကြီးကို ဆက်လက်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။
စစ်အစိုးရက ‘ကျောင်းသားဆိုးများရဲ့ လှုပ်ရှားမှု၊ ဗကပလိုလားသူ ကျောင်းသားတစုရဲ့ လှုံ့ဆော်ဖန်တီးမှု’ စသဖြင့် စသဖြင့် သတင်းစာ၊ ရေဒီယိုတို့ကနေ ပြစ်တင်ရှုတ်ချ သရုပ်ဖျက်ခဲ့ပါတယ်။ သောင်းနဲ့ချီတဲ့ စီတန်းလှည့်လည် ဆန္ဒပြပွဲ ကြီးတွေအတွင်းမှာ ကျောင်းသားတွေသာမက၊ အလုပ်သမား၊ ဝန်ထမ်းနဲ့ မြို့နေဆင်းရဲသားတွေပါ ပါဝင်ပူးပေါင်းခဲ့ကြပြီး စစ်အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး ကြွေးကြော်သံတွေကို ဟစ်ကြွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီ ၇၅ ခုနှစ်၊ ဇွန် ၆ ကျောင်းသားသပိတ်ကြီးကိုလည်း စစ်အစိုးရဟာ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များရဲ့ အထွဋ်အမြတ်ထားရာ ရွှေတိဂုံကုန်းတော်ပေါ်ကို စစ်ဖိနပ်တွေနဲ့ ဒရမန်းကြမ်း တက်ဝိုင်းခဲ့ပြီး နှိမ်နင်းရိုက်နှက် ဖမ်းဆီးတာတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အကုန်လုံး မိသမျှကို အင်းစိန်ထောင် ပို့ခဲ့ပြီး ပြစ်ဒဏ်ပေး ထောင်ချတာတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၇၅ ခုနှစ်ထဲမှာပဲ ပဲခူးရိုးမ အခြေခံဒေသနဲ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတခွင်ရှိ ဗကပနဲ့ မဒညတ အင်အားစုတွေအပေါ် ထိုးစစ်ဆင်ပြီး စစ်အစိုးရက အသာစီးရသွားပေမယ့် နိုင်ငံရေးအရ၊ စီးပွားရေးအရတော့ စစ်အစိုးရအဖို့ အကြပ်အတည်း ကြီးသထက် ကြီးလာခဲ့ရတဲ့နှစ် ဖြစ်ပါတယ်။ ၇၄ ခုနှစ်ကတည်းက အလုပ်သမားသပိတ်နဲ့ ဦးသန့်အရေးအခင်းကို စစ် တပ်နဲ့ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခဲ့တဲ့အတွက် နိုင်ငံရေးသိက္ခာ ကျခဲ့ရတဲ့ စစ်အစိုးရဟာ ၁၉၇၅ ခုနှစ်၊ ဇွန် ၆ ကျောင်းသား သပိတ်ကြီးနဲ့ ဆက်လက်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး နိုင်ငံရေးသိက္ခာ ထပ်မံကျဆင်းခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ ၇၄-၇၅ စီးပွားရေးစီမံကိန်း ဟာလည်း လျာထားချက်အတိုင်း ဖြစ်မလာခဲ့ပါ။ ကုန်ဈေးနှုန်းတက်မှုတွေနဲ့ ငွေကြေးဖောင်းပွဲမှုတွေကို ဘယ်လိုမှ ကာကွယ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ဗကပ က ဖြုတ်ထုတ်သတ်လမ်းစဉ် မှားတယ်လို့ သုံးသပ်ပြီး တရားဝင် ရပ်ဆိုင်းသွားပေမယ့် မဆလဥက္ကဋ္ဌကြီး ဦးနေဝင်းရဲ့ ဖြုတ်ထုတ်လမ်းစဉ်ကတော့ ဆက်လက်သက်ဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ ဒီတခါ ဖယ်ရှားခံ လိုက်ရတဲ့သူကတော့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးစိန်ဝင်း (ဗိုလ်မှူးချုပ်စိန်ဝင်း)ဖြစ်ပါတယ်။ ဖိအားပေးပြီး နုတ်ထွက်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။
ဗကပ ရိုးမဗဟိုဟာ ဥက္ကဋ္ဌ သခင်ဇင်၊ အတွင်းရေးမှူး သခင်ချစ်တို့ ကျဆုံးရပြီးနောက် ပြိုပျက်သွားခဲ့ရပေမယ့် အရှေ့မြောက် ဗကပ ဗဟိုဟာ အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ ဆက်လက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
KNU ဟာလည်း ၇၅ ခုနှစ်ထဲမှာ ရိုးမနဲ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် အခြေခံဒေသတွေ လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီး အင်မတန် ကြီးမားတဲ့ နစ်နာမှုကြီးတွေ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပေမယ့် ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဘဇံအပါ၊ ဗိုလ်ချုပ်မြမောင်အပါ KNU ပါတီဝင်တွေဟာ ဗိုလ်ချုပ်မြနဲ့ တလုံးတည်း တစည်းတည်း ပူးပေါင်းလိုက်နိုင်ကြပြီး မာနယ်ပလောကနေ ဒေါနတောင်ကြောတလျှောက်၊ ကရင်ပြည်နယ်တလျှောက်၊ ထိုင်းနိုင်ငံ နယ်စပ်တလျှောက် တော်လှန်ရေးအခြေခံဒေသတွေ ထူထောင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ ပါတယ်။ တခုတည်းသော KNU အဖြစ် အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ ဆက်လက်လှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြည်နယ်ပေါင်းစုံ ပြည်ထောင်စု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီတပ်ပေါင်းစု (ပမဒတ)ကို ဖွဲ့စည်းလိုက်နိုင်ပြီး ဘုံရန်သူ စစ်အစိုးရ ဦးတည်တိုက်ခိုက်ရေး လမ်းကြောင်းကို ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မာနယ်ပလောမှာ လူမျိုးပေါင်းစုံ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတရပ် ကျင်းပပြီး ပမဒတ ဟာ ဒီနှီးနှောဖလှယ်ပွဲရဲ့ ရလဒ်အဖြစ် ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ၇၅ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၈ ရက်နေ့မှာ ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ ပမဒတ မှာ ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ KNU ပါတီ၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၊ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ၊ ကရင်နီ အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီနဲ့ ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုများကလည်း စစ်အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲတွေကို ဆက်လက် အကောင် အထည် ဖော်နေကြဆဲ၊ အလုပ်သမားထု ကျောင်းသားထုတိုက်ပွဲတွေကလည်း တခုပြီးတခု ပေါ်နေဆဲမှာ မဆလ စစ်အစိုးရကတော့ အာဏာကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်ရေးအတွက် နယ်ပယ်ပေါင်းစုံကို ဟာကွက် မရှိအောင် တဆင့်တိုး ကြိုးပမ်းအားထုတ် ဖိနှိပ်ကန့်သတ်တာတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ စာပေအနုပညာနယ်ပယ် ကိုလည်း တဆင့်တိုး ကန့်သတ်လာပါတယ်။
၁၉၇၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လမှာ ပြည်ထဲရေးနှင့် သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိတဲ့ ပုံနှိပ်သူနှင့် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူများ မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ရုံးကနေ ‘စာပေနှင့်စာနယ်ဇင်းများ လိုက်နာကြရမယ့် စာပေမူဝါဒ’ဆိုတာကို ချမှတ်ပေးပြန်ပါတယ်။ (၁) မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ကို မထိခိုက်ရေး၊ (၂) နိုင်ငံတော်၏ အယူအဆ လုပ်ငန်းစဉ်မူများကို မထိခိုက်ရ၊ (၃) ဆိုရှယ်လစ်စီးပွားရေးစနစ်ကို မထိခိုက်ရ၊ (၄) တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို မထိခိုက်ရ၊ (၅) နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေး၊ အေးချမ်းသာယာရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် လူမှုရေးဘဝကို အန္တရာယ်မဖြစ်စေရ၊ (၆) အချိန်ကာလနှင့် မဆီလျော်သော အတွေးအခေါ်အယူအဆများ မဖော်ပြရ၊ (၇) အချက်အလက်အားဖြင့် မှန်သော်လည်း အခြေအနေနှင့် မဆီလျော်သော ရေးသားချက်များ မဖော်ပြရ၊ (၈) ညစ်ညမ်းအရေးအသားများ မဖော်ပြရ၊ (၉) ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှု၊ သွေးထွက်သံယိုမှု ပြစ်မှုများကို လှုံ့ဆော်စေသော အရေးအသားများ မဖော်ပြရ၊ (၁၀) အစိုးရဌာနများရဲ့ လုပ်ရပ်များကို အပြုသဘောမဆောင်သော ဝေဖန်ချက်များ မဖော်ပြရ၊ (၁၁) ပုဂ္ဂလိက တဦးတယောက်ကို တိုက်ခိုက်သောစာများ မဖော်ပြရ လို့ ဆိုပါတယ်။ တခွန်းထဲနဲ့ ချုပ်ပြီးပြောရရင်တော့ စစ်အစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီး၊ မဆလနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာမှ မရေးကြနဲ့ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
(ဦးနေဝင်းက ဒေါ်ခင်မေသန်း သေပြီး ဒေါ်နီနီမြင့်ကို ယူ၊ ဒေါ်နီနီမြင့်နဲ့ ကွဲနေစဉ်အတွင်း ရတနာနတ်မယ်ဆိုတာကြီးကို ထပ်ပြီးယူထားတုန်းမှာ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစန်းယုကလည်း ဟိုမိန့်ခွန်းပြောလိုက်၊ ဒီမိန့်ခွန်း ခြွေလိုက်နဲ့ လုပ်ပြနေတုန်းမှာ၊ ဆန်ပြဿနာတွေ ပေါ်ပြီးနောက် စပါးစိုက်ရေး၊ ဆန်တိုးတက်ထုတ်လုပ်ရေးတွေကိုပဲ ပြောတဲ့သူက ပြောနေတုန်းမှာ စာရေးဆရာ ‘မောင်ဖေငယ်’က ‘ဖောင်းကားစား’ဆိုတဲ့ ရာဇဝင်နောက်ခံ စာအုပ်တအုပ်ကို ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ဖောင်းကားစား စာအုပ်ထဲမှာ “မယားပြီး မယား၊ စကားပြီး စကား၊ စပါးပြီး စပါး”ဆိုတာ ထည့်ရေးတဲ့အတွက် မောင်ဖေငယ်ကို တသက်တကျွန်း ထောင်ဒဏ်ချမှတ်တာတောင် လုပ်ပါတယ်။)
၁၉၇၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်္ဘာ ၂၈ ရက်နေ့မှာ ရန်ကုန်တိုင်း သတင်းထောက်များ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှာ ပါတီစာနယ်ဇင်း ဌာနမှူးဖြစ်တဲ့ ဦးစောဦးက မဆလပါတီကိုယ်စား “ဆိုရှယ်လစ်စီးပွားရေးစနစ်ကို ဆန့်ကျင်သူတွေအတွက် လွတ်လပ်စွာ ရေးသားခွင့် မပေးနိုင်ပါဘူး၊ နိုင်ငံတော်ကို ဦးဆောင်နေတဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ပါတီကို ဆန့်ကျင်နေသူတွေကိုလည်း လွတ်လပ် စွာရေးသားခွင့် မပေးနိုင်ပါဘူး” လို့ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပဲ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
စာပေအနုပညာ နယ်ပယ် တခုလုံးကို လှုပ်မရအောင် စာပေစီစစ်ရေးဌာနဆိုတာနဲ့လည်း ချုပ်ကိုင်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဆန့်ကျင်တော်လှန်တဲ့ စာအုပ်၊ စာတမ်း၊ စာစောင်တွေ ထွက်ပေါ်မလာရအောင်၊ စာအုပ်အဆင့်ဆိုတာအထိကို ရောက်မလာရအောင် စာမူတွေကို ကြိုတင်တင်ပြ ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးမှ ရိုက်နှိပ်တဲ့အဆင့်ကို လုပ်ကိုင်စေပါတယ်။ ရိုက် နှိပ်ပြီး ထပ်မံတင်ပြရမယ်၊ ထပ်မံတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီးမှ စာအုပ်ဖြန့်ချိခွင့်ကို ပေးပါတော့တယ်။ အဲဒါကြောင့် တရားဝင် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိခွင့် အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးရပါတယ်။ စစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်တော်လှန်တဲ့ စာပေအနုပညာတွေကို ရေး သားဖန်တီးလိုသူတွေဟာ တရားမဝင်နည်းနဲ့ပဲ ရိုက်နှိပ်ဖြန့်ချိရပါတော့တယ်။ ဒါကြောင့် စာကူးစက်၊ လက်လှည့်စက် ကလေးတွေနဲ့ပဲ လျို့ဝှက်စွာ ရိုက်နှိပ်ဖြန့်ချိထုတ်ဝေလာကြတဲ့ စာစောင်လေးတွေ ၇၀ ပြည့်နှစ်လွန် နှစ်ဦးပိုင်းတဝိုက် ပလူပျံခဲ့ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ကဗျာစာအုပ်လေးတွေ များပါတယ်။ ဒါတောင် ဖမ်းဆီးခြင်းခံရရင် ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်း ခံရပါတယ်။ ဗမာပြည်က တိုးတက်တဲ့ စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာများဟာ အမေရိကန်နယ်ချဲ့တို့ရဲ့ ဗီယက်နမ်ကျူးကျော်စစ်အပေါ် ရှုတ်ချကန့်ကွက်ကြတဲ့ စာကဗျာတွေ၊ ဗီယက်နမ်ပြည်သူများဘက်က ရပ်တည်တဲ့ စာကဗျာတွေ ရေးသားဖန်တီးခဲ့ကြ ပြီး တရားဝင် စာစောင်မဂ္ဂဇင်းများကနေ ဖော်ပြဖြန့်ချိခဲ့ကြတာတွေရှိသလို စာကူးစက်၊ လက်လှည့်စက်လေးများနဲ့ ရိုက်နှိပ်ပြီး တရားမဝင်ဖြန့်ချိရတဲ့ စာစောင် စာအုပ်ငယ်လေးများကနေပြီးလည်း ဖြန့်ချိထုတ်ဝေဖော်ပြတာတွေ ရှိခဲ့ပါ တယ်။ စာပေလွတ်လပ်ခွင့် မရှိတဲ့ကြားက နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး၊ စစ်အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးတွေ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ ပါတယ်။
စစ်အစိုးရက အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်နေတဲ့ကြားက၊ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ကွပ်ညှပ်ပြီး ပိတ်ပင်တားမြစ် ယုတ်မာနေတဲ့ကြားထဲက စစ်အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတရပ် ထပ်မံထွက်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။ ၇၅ ဇွန် ၆ ကျောင်းသားသပိတ်ကြီး အပြီး ၉ လကျော်အကြာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ‘မှိုင်းရာပြည့်’လှုပ်ရှားမှုကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ။
အနီးခေတ် ဗမာပြည်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုသမိုင်းအကျဉ်း (၁၉၄၈-၂၀၀၀)မှ ကောက်နုတ်ဖော်ပြပါသည်။
Posted by နေမင်းနီ at Thursday, June 18, 20090comments Links to this post
ပူပူစပ်စပ် လူသူပြတ်သနဲ့ 
ကိုင်းခက်တွေ ခြောက်သွေ့ 
မြေငွေ့ တွေ ခြောက်ခမ်း
ထိုးသတ်လို့ကျိုးပြတ်ကုန်ကြ
လောင်စာလည်း မတို့ 
ရှို့ သူလည်း မရှိ
နှစ်ပွင့် … သုံးပွင့်
မီးခိုးတွေ အူအူထလို့ 
မီးညွန့် ငွေ့ ငွေ့ 
သူ့ အနာဂတ်၊ ဆုံးဖြတ်ပေးဖို့ 
ခင်ဗျားကို အားကိုးပါတယ်…။ ။
(ဇွန် ၆ အလုပ်သမားသပိတ်ကြီးအား ဂုဏ်ပြုလျက်)
(၆၊ ၆၊ ၂၀၀၀)
Posted by နေမင်းနီ at Wednesday, June 17, 20090comments Links to this post
Posted by နေမင်းနီ at Tuesday, June 16, 2009 1 comments Links to this post
The smooth, long bamboos
When split with the knife
Are all destroyed.
The rough, long split bamboos,
When whittled with the knife
And woven,abeautiful
basket is made.
The basket is of value more
Then the bamboo –
Regret not of the bamboo’s loss.
-Maung Swan Yi-
From collection of ‘Red and Blue’
Posted by နေမင်းနီ at Monday, June 15, 20090comments Links to this post
တောင်းမှာ ဝါးထက်၊ တန်ဖိုးတက်၏
ဝါးတွက် နှမျောမရှိနှင့်…။ ။
၂၉၊ ၁၁၊ ၆၁
Posted by နေမင်းနီ at Friday, June 12, 20090comments Links to this post
မတ်လလှုပ်ရှားမှုရဲ့ အဆက် ဇွန်လလှုပ်ရှားမှုဟာ တစတစ ပိုပြီးအားကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား မောင်ဖုန်းမော် သွေးမြေကျခဲ့ရတာကနေ၊ တနည်းအားဖြင့် ကျောင်းသားသွေး မြေကျခဲ့မှုကနေ စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုကြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် ဦးဆောင်သူဟာ ကျောင်းသားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျောင်းသား တွေရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေကလည်း (၁) မတ်လ အရေးအခင်း၌ အကြမ်းဖက် ရိုက်နှက် သတ်ဖြတ် မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့သူများအားလုံးကို ဖော်ထုတ်အရေးယူပေးရန်၊ (၂) သပိတ်တိုက်ပွဲများ၌ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြကြသော ကျောင်းသားကျောင်းသူများကို အနှောင့်အယှက်မပြုရန်၊ (၃) အဖမ်းအဆီး ခံထားရတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူအားလုံးကို ခြွင်းချက်မရှိ ပြန်လွှတ်ပေးရန်၊ (၄) ကျောင်းသား အရေးအခင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မည်သူတဦးတယောက်ကိုမျှ ကျောင်းမထုတ်ရန်၊ (၅) ကျောင်းသား သမဂ္ဂများကို တရားဝင်ဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုရန်၊ ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးများ အပြည့်အဝ ပြန်လည် ပေးအပ်ရန် ဆိုတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသားအရေးကို ဗဟိုပြုထားတဲ့ တရားမျှတ မှန်ကန်ရိုးရှင်းလွန်းလှတဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စစ်အစိုးရက စစ်အာဏာရှင် စနစ် ကျင့်သုံးနေသူများပီပီ ဘာတခုကိုမှ လိုက်လျောဖို့ ဆန္ဒမရှိခဲ့ကြပါ။ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲပစ်ဖို့နဲ့ မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ နှိမ်နင်းပစ်ဖို့ကိုပဲ ဦးတည်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့မှာ ‘မြေနီကုန်းအရေးအခင်း’ ဆိုတာတခု ထပ်ပေါ်လာပါတယ်။ စီတန်းလမ်းလျှောက်လှည့်လည်လာတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူငယ်လေးတွေကို ဖြိုခွဲပစ်ရေးအကြံ နဲ့ လုံထိန်းရဲကားတွေက အတင်းဒရကြမ်း မောင်းနှင်ဝင်ရောက်လာပြီး တိုက်ခိုက် ဖြိုခွင်းတာကြောင့် မရှုရက်စရာမြင်ကွင်း အဖြစ်အပျက်ကြီး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပါတယ်။ အခုလို လုံထိန်းကားတွေက ကျောင်းသူ ကျောင်းသားငယ်လေးတွေအပေါ် ကားနဲ့ ဝင်ရောက် တိုက်သတ်တာကို မခံမရပ်နိုင်တဲ့ ပြည်သူ လူထုကြီးက အနီးအနားမှာ ရှိနေကြတဲ့ မြေနီကုန်း လူထုကြီိးက ကျောင်းသားထုနဲ့ပေါင်းပြီး လုံထိန်း ရဲတွေကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။ ရရာလက်နက်တွေစွဲကိုင်ပြီး နာနာကျည်းကျည်း ပြန်လည်တုန့်ပြန်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ လုံထိန်းရဲ ၆ ယောက် သေဆုံးခဲ့ရတဲ့အထိ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖြစ်ပွားခဲ့ရပါတယ်။ ရက်ရက်စက်စက် အနှိပ်ကွပ်ခံနေရတဲ့ ကျောင်းသားထုနဲ့ စစ်အစိုးရအပေါ် ပြင်းပြင်းထန်ထန် မုန်းတီး နာကျည်းနေတဲ့ ပြည်သူလူထုဟာ ဇွန်လ အရေးအခင်းတွေအတွင်းမှာ ပေါင်းစပ်မိသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကွေ့ချိုးကြီးတခုဆီ ဦးတည်မိကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန် မန္တလေး တက္ကသိုလ်တွေ ပိတ်လိုက်ရပြီးနောက် စစ်အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဟာ တောမီးပမာ ပျံ့နှံ့သွားရပါ တော့တယ်။ ကြေညာချက်တွေ၊ ထုတ်ပြန်စာတမ်းတွေ၊ ဝေငှကြတာတွေ နေရာအနှံ့ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီး မန္တလေး၊ မြင်းခြံ၊ စစ်ကိုင်း၊ မုံရွာ၊ ရွှေဘို၊ မိတ္ထိလာ အထကတွေမှာလည်း ပိုစတာတိုက်ပွဲတွေ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဇွန်လလှုပ်ရှားမှုတွေအတွင်း ကျောင်းသားတိုက်ပွဲတွေ ကြားကနေ ပေါ်ထွက်လာတဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးရဲ့ နာမည်တွေကတော့ ‘မင်းကိုနိုင်’ ဆိုတာနဲ့ ‘မိုးသီးဇွန်’ ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇွန် ၂၃ ရက်မှာ ပဲခူးမှာလည်း လူထုအုံကြွမှုကြီးပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ စစ်အစိုးရက နေဝင် မီးငြိမ်း အမိန့်ထုတ်ပြန်ပြီး ဟန့်တားနှိပ်ကွပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူထုတိုက်ပွဲတွေက တောမီးပမာ ဖြစ်လာစပြုပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဇွန်လအဆက် ဇူလိုင်လတိုက်ပွဲတွေ ဆက်တိ်ုက်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ရန်ကုန်ကျောင်းသားထုက နေရာအနှံ့လှုပ်ရှားလာပြီး ရွှေတိဂုံဘုရား ကုန်းတော်ပေါ်မှာလည်း တရားပွဲတွေ၊ ဟောပြောမှုတွေ၊ စာရွက်စာတမ်းဖြန့်ဝေမှုတွေ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် လုပ်ဆောင်လာ ပါတယ်။ ‘ဗကသ’ အဆောက်အဦကြီးရဲ့ ဓါတ်ပုံနဲ့ ၇ ရက် ဇူလိုင်ကြီးရဲ့ အရိုးတွန်သံတွေကလည်း ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ပဲ့တင်ညံလာခဲ့ပါတယ်။ စစ်အစိုးရက အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲတဲ့နည်း၊ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုကို သေးသိမ်အောင် ပုတ်ခတ်ပြောဆို အသရေဖျက်တဲ့ အောက်လမ်းနည်း၊ ဒလျှိုဒလံတွေလွှတ်ပြီး သပ်လျှိုဖြိုခွဲတဲ့နည်း၊ ညစ်နည်းပဒေသာ ကျင့်သုံးပြီး ဟန့်တားနှိပ်ကွပ်ခဲ့ ပါတယ်။ အဖမ်းအဆီးတွေ မရေမတွက်နိုင်အောင် ပိုမိုများပြားလာခဲ့ပါတယ်။ ဇူလိုင်လထဲမှာ တောင်ကြီးနဲ့ ပြည်မှာလည်း ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းတွေ ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ (စစ်အစိုးရက ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းတွေနဲ့ အာရုံပြောင်းကြည့်ဖို့ကြိုးစားတာလို့ ယူဆကြတာတွေရှိသလို ‘တောင်ကြီးပြိုလို့ ပြည်ပျက်ပြီးပြီ’ ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ ဗေဒင်ကွက်နဲ့ ယတြာချေတာလို့လည်း ထင်ကြေးပေးကြတဲ့ အဓိကရုဏ်းကြီးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။) ပေါ်ပေါက်လာသမျှသော အရေးအခင်း တွေဟာ ဘယ်လိုပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ပဲ ပေါ်ပေါက်လာလာ၊ ဘာကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာလာ၊ နောက်ဆုံး မှာတော့ မဆလ ဆန့်ကျင်ရေး စစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေးဆီကိုသာ ရောက်ရှိသွားပါတယ်။ ကျောင်းသားများ က စတင်ပေါက်ကွဲဆင်နွှဲလိုက်တဲ့ တိုက်ပွဲကြီးဆိုတာ အားလုံးက အလေးထား အသိပြုကြ သလို၊ လူထုကြီးကပါ ပူးပေါင်းပါဝင် အားဖြည့်လာတဲ့အခါကျမှ ပိုမိုကျယ်ပြန့်ကြီးမား နက်ရှိုင်းလာခဲ့တယ် ဆိုတာကိုလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ လူထုကြီးကပါ နေရာအနှံ့ ပါဝင်ပူးပေါင်း အားပေးထောက်ခံလာတာဟာလည်း ကျောင်းသားထုရဲ့ တရားမျှတတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ထောက်ခံအားပေး ကူညီဝန်းရံချင်လွန်းတဲ့ စိတ်ဆန္ဒကြောင့်ချည်း မကပါ။ အရင်းခံက လူထုကြီးကိုယ်တိုင် နှစ်ရှည်လများခံစားနေကြရတဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ ဖောက်ပြန်တဲ့ ပေါ်လစီအရပ်ရပ်အောက်ကနေ ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး ကြပ်တည်းမှုတွေ ကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တတိုင်းပြည်လုံး လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်လာရပါတယ်။
ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့မှာ တခုတည်းသော ဦးဆောင်ပါတီကြီး မဆလရဲ့ အရေးပေါ် ပါတီ ညီလာခံကြီး ခေါ်ဆိုကျင်းပပါတယ်။
ပါတီဥက္ကဌကြီး ဦးနေဝင်းက မလွှဲမရှောင်သာ နုတ်ထွက် အနားယူရေးကိစ္စကို ပြောဆိုလာရပါ တယ်။ သူတင်မက ဦးစန်းယု၊ ဦးအေးကို၊ ဦးကျော်ထင်တို့ပါ အနားယူကြမယ့်အကြောင်း ပြောဆို လာပါတယ်။ ပြောပုံ ဆိုပုံကတော့….
“မတ်လနဲ့ ဇွန်လများအတွင်းက စိတ်မချမ်းမြေ့စရာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကြောင့် သွယ်ဝိုက် သောနည်းနဲ့ တာဝန်မကင်းသူဟု ယူဆတာကတကြောင်း၊ အသက်အရွယ်အားဖြင့် ထောက်လာတာက တကြောင်းတို့ကြောင့် ပါတီဥက္ကဋ္ဌနဲ့ ပါတီဝင်အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ခွင့် ပေးကြပါလို့…”
ပြောဆိုပြီး နှုတ်ထွက်စာကို ကိုယ်တိုင်တောင် ဆက်ဖက်နိုင်စွမ်းမရှိတော့တဲ့အတွက် ဦးထွေးဟန် လက်ထဲစာကို ထိုးထည့်ပေးပါတယ်။ ဦးထွေးဟန်က ဦးနေဝင်းအစား ဖတ်ပြရပါတယ်။ အဲဒီ ညီလာခံမှာပဲ ဦးနေဝင်းဟာ (သမဂ္ဂကြီးရဲ့ အရိုးတွန်သံကို ကြားလာရပြီဖြစ်တဲ့ အတွက်) ၇ ရက် ဇူလိုင်ကိစ္စ၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂကြီးဖြိုချခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်လွတ်ရုန်းဖို့ ကြိုးပမ်း ပြောဆိုတာတွေ လုပ်ပါတယ်။ အချုပ်ကတော့ ဦးအောင်ကြီးအပေါ် ပုံချနိုင်ဖို့ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို နုတ်ထွက်တော့မယ့်ကိစ္စ၊ ကိုယ်လွတ်ရုန်းတဲ့ကိစ္စတွေ ပြောဆိုပြီးတဲ့အခါမှတော့ သူရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း စစ်အာဏာရှင်ပီပီ စစ်အာဏာရှင်စိတ်ဓာတ်ကို ဖော်ပြတဲ့ ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးကို ခြိမ်းခြောက်ပြီး စစ်တပ်ကို မြှောက်ပင့် မီးစိမ်းပြပေးလိုက်တဲ့ အမိုက်အရိုင်းဆုံးစကားကြီးကို ပြောဆိုသွားပါတော့တယ်။ အဲ့ဒီစကားကတော့…
“နောင်ကို လူစုလုဝေးနဲ့ ဆူဆူပူပူလုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့ စစ်တပ်ဆိုတာ ပစ်ရင် မှန်အောင် ပစ်တယ်။ မိုးပေါ်ထောင်ပြီး ဖောက်တာမပါဘူး။ အဲဒါ နောင်ကို ဆူဆူပူပူလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီလို ဆူတဲ့လူတွေ မသက်သာဘူးမှတ်ပေတော့”…လို့ ဆိုတဲ့စကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ခြိမ်းခြောက်ကြိမ်းမောင်း ပြောဆိုသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တဖက်ကလည်း သူ ပြောဆိုကြိမ်းမောင်း သွားတဲ့အတိုင်း အကြမ်းနည်းနဲ့ ကိုင်တွယ် အကောင်အထည်ဖော်ဖို့အတွက် လူရွေးထားပြီးပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ရက်စက်တဲ့နေရာမှာ နာမည်ကြီးတဲ့၊ (ကရင်ခေါင်းဆောင်ကြီး စောဘဦးကြီးကို သတ်ရာမှာ၊ ၇ ရက်ဇူလိုင်ကို သွေးချောင်းစီးအောင် သတ်ရာမှာ နာမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားခဲ့တဲ့) ‘သားသတ်သမား’ဘွဲ့ရ ဦးစိန်လွင်ကို သူ့ရဲ့ ဆက်ခံသူအဖြစ် ထိုးတင်ရွေးချယ် အပ်နှင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
(အနီးခေတ် ဗမာပြည်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုသမိုင်းအကျဉ်း -၁၉၄၈-၂၀၀၀)မှ ကောက်နုတ်ဖော်ပြပါသည်။
Posted by နေမင်းနီ at Thursday, June 11, 20090comments Links to this post